ဖြင့် ဇာတ်ကား100 ကား
500) Days of Summer ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဟာ ပရိသတ်တော်တော်များများ သိပြီးသားဖြစ်တဲ့ 2009 ခုနှစ်ရဲ့Sleeper Hit Movie ဖြစ်လာတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ ကျွန်တော်တို့လို အသည်းကွဲခဲ့ဖူးတဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေအတွက်တော့ ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ ခံစားချက်တွေ တိုက်ဆိုင်နိူင်ပြီး ခံစားမှုအပြည့်ကို ပေးနိူင်ပါတယ်။ ကျွန်တောိ ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီး မငိုခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တော်တော်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ခံစားချက်မျိုးစုံ နဲ့ခံစားခဲ့ရတာကြောင့် ဘာကြောင့် ခံစားခဲ့ရတာလဲ ဆိုတာတောင် မသိခဲ့ရပါဘူး။ဘာကြောင့် ကျွန်တော် ထိုရုပ်ရှင်ကို အရမ်းနှစ်သက်ရပါသလဲ?
ကျွန်တော် စောစောက ပြောခဲ့သလိုပဲ။ အချစ်ကားတွေသည် အမျိုးသမီးတွေအကြိုက်ဖြစ်အောင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့အမြင်တွေဘက်ကပဲ ရိုက်ပြခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့လို အမျိူးသားတွေ ဘက်ကကြတော့ ဘာကြောင့် မတင်ပြခဲ့ကြတာလည်း။ ဒါမေးခွန်းကို တော်လှန်ခဲ့တဲ့ သာမာန်အချစ်ကားတွေရဲ့ရေးစီးကြောင်းကို တော်လှန်ခဲ့တဲ့ တစ်ကားတည်းသော ကျွန်တော်ကြည့်ဖူးသော အချစ်ရုပ်ရှင်သည် (500) Days of Summer ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်သည် ထိုရုပ်ရှင်ကို နှစ်သက်မိတဲ့ ပထမဆုံးသော အချက်ပင်ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးတွေသည် အချစ်ကို စိတ်ကူးပိုယဉ်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ယောင်္ကျားလေးတွေက အချစ်ကို ပိုခံစားတတ်ကြပါတယ်။ထိုရုပ်ရှင်ထဲက Tom ဆိုသော လူငယ်လေးရဲ့ ဇာတ်ကောင်ကို ကျွန်တော်ကြည့်နေရင်း ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် ပြန်မြင်ယောင်လာမိတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ကျွန်တော်ပြန်မြင်ယောင် လာမိတယ်။ ကျွန်တော် Summer ဆိုသော မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့် ဘဝတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ခံစားချက်ခြင်း တူညီတယ်ဆိုသော ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီရုပ်ရှင်နှစ်သက်မိတဲ့ ဒုတိယ အချက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။တတိယ အချက်ကို ပြောကြည့်ရအောင်။ ဒီကားသည် သာမာန်ရုပ်ရှင်တွေလို တင်ဆက်ထားခြင်းမဟုတ်။ 99% သော အချစ်ကားတိုင်းသည် Timeline ကို Linear Style ဖြင့် တင်ပြလေ့ရှိသည်။ ဘာကြောင့်လဲ? တင်ပြရတာ လွယ်ကူတာကိုး။ ဒါပေမဲ့ (500) Days of Summer ကတော့ ဇာတ်ကြောင်းပြောပြချက်ကို Non-Linear Storytelling Style ဖြင့် တင်ပြထားတယ်။ ဒီအချက်က ပေါ့ပျက်ပျက်ကြည့်ရင် ရုပ်ရှင်ကို ရှုပ်ထွေးသွားစေပေမဲ့ သေသေချာချာ စိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်ပါက ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကြောင်းကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ နားလည်စေခဲ့တယ်။ ဇာတ်ညွှန်းသည် အလွန်ကို Smart ဖြစ်လွန်းသော ဇာတ်ညွှန်း။ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ညွှန်း။ ဘာကြောင့် non-linear နဲ့တင်ပြခဲ့သလဲလို့ဆိုရင် အတိတ်နဲ့ပစ္စပ္ပန် ကို ယှဉ်ပြချင်တဲ့ သဘော။ ဟိုး တစ်ချိန်က ဒီလို ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ယခုအခါ ထိုကဲ့သို့သော မဟုတ်။ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ လူသားတွေရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကို မြင်သာစေခဲ့တယ်။ ထို့အပြင် ထို Timeline နှစ်ခု အမြဲ ယှဉ်ပြချက်များသည် Tom ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ပို၍ မြင်သာစေခဲ့တယ်။ ဒါက တတိယ အချက်။နောက်တစ်ချက်က ဇာတ်ကောင်များ။ ဇာတ်ရံများကို ကျွန်တော် မပြောလို။ ဒါပေမဲ့ Tom နဲ့Summer တို့အကြောင်းကို တော့ ကျွန်တော် ပြောချင်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဇာတ်လမ်းကို ပြောင်းလဲပစ်စေခဲ့တဲ့ Character Developments တွေ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဒီအချက်တွေကပဲ ရုပ်ရှင်ရဲ့ပင်မပဲဖြစ်တယ်။ Summer သည် အချစ်ကို မယုံကြည်ခဲ့သူ။ အချစ်ဆိုတာ လက်တွေ့လောကတွင် မရှိ။ စိတ်ကူးယဉ် Fantasy သက်သက်ပဲဟု ငယ်ရွယ်စဉ်က အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့သော သူမရဲ့မိဘနှစ်ပါးကို ကြည့်ပြီး အချစ်ကိုထိုကဲ့သို့သတ်မှတ်ခဲ့သူ။ Tom ကတော့ သူမနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်။ ငယ်ရွယ်စဉ် ကလေးဘဝတုန်းက British Pop Songs တွေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်ပြီး အချစ်စစ်ဆိုသော အရာကို ယုံကြည်သူတစ်ဦး။ ဒါပေမဲ့ လောကမှာ သိတဲ့အတိုင်း အရာအားလုံးဟာ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ သဘောသဘာဝရှိသည့် အားလျော်စွာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်ကောင်စရိုက် ပြောင်းလဲမှုသည် ဇာတ်လမ်းကို ပို၍ အားသာစေခဲ့ပြန်သည်။ Summer ကို ကျွန်တော် မမုန်း။ သူမသည် လက်တွေ့ဆန်သော မိန်းကလေးတစ်ဦး။ သူမသည် အေးစက်သော နှလုံးသား ပိုင်ရှင် မိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ သူမသည် Tom ကို ဘယ်တုန်းကမှ လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သောသူ မဟုတ်ခဲ့။ ရိုးသားသော သူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့သည်။ Tom ကိုလည်း ကျွန်တော်မမုန်း။ သူသည် ကျွန်တော့်ရဲ့ဆင်တူ Fictional Character တစ်ဦး။ ဒါသည် စတုတ္ထအချက်။ပဉ္စမအချက်ကို ပြောရမည်ဆိုရင် ဇာတ်လမ်းမှာ သူတို့ပြောသွားကြတဲ့ စကားတွေ။ အပြင်လောက နဲ့အရမ်းကို စက်နွယ်နေသော အကြောင်းအရာ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို လှပ၍ ထိမိသော စကားလုံးများဖြင့် တန်ဆာဆင်ကာ ပြောဆိုသွားခဲ့ကြသည်။ ထိုစကားလုံးတွေနှင့်ပဲ ကျွန်တော်ရယ်မောခဲ့ရသည်။ ထိုစကားလုံးတွေနဲ့ပဲ ကျွန်တော် တစ်ကိုယ်တည်း သဘောတူ၍ ခေါင်းတွေ ငြိမ့်ခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် ထိုစကားလုံးတွေနဲ့ပဲ တစ်ကိုယ်တည်း ငိုကြွေးခဲ့ရသည်။ဥပမာ… “Some people are meant to fall in love with each other, but not meant to be together.” ဆိုတဲ့ စာသားလေးသည် ရင်ကို ခွဲကာ နှလုံးသားကို ဆောက်နဲ့ထွင်းခံရသလို့အောင့်သက်သက်ဖြစ်သေခဲ့တယ်။“I need to know that you’re not gonna wake up in the morning and feel differently.” ဒါကိုလည်း စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် သူ့ကို အချစ်စစ်နဲ့မချစ်ဘူးဆိုတာကို သိတဲ့ Tom က သိသိရက်နဲ့မသေချာတတ်တဲ့ အနာဂတ်နဲ့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ လူသားတွေရဲ့စရိုက်ကို သိသောကြောင့် သေချာအောင် မေးခဲ့တဲ့ အမေးလေး တစ်ခု။“Either she’s an evil, emotionless, miserable human being, or she’sarobot.” မည်မျျလောက် အသည်းကွဲကာ နာကျည်းနေသလဲဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေ။“Do you ever do this, you think back on all the times you’ve had with someone and you just replay it in your head over and over again and you look for those first signs of trouble?” ဒီစကားလေးကတော့ Relationship တစ်ခုမှ ရှိနေတဲ့ ယောင်္ကျားလေးတိုင်းရဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် မေးမြန်းနေတဲ့ မေးခွန်းလေးတစ်ခု။ မိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ဘက်လူရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဆက်ဆံမှုတွေကို ကြုံတွေ့လာရတဲ့ အခါ ကျွန်တော်တို့တွေ အမြဲ ထိုကဲ့သို့လုပ်လေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။” Just because she likes the same bizzaro crap you do doesn’t mean she’s your soul mate.” ဒီစကားကို Tom ရဲ့ half younger sister က Tom ကို အမှန်တရားကို မြင်စေတဲ့ ရုတ်တရက် ပြောလိုက်တဲ့ စကား။ အရမ်းမှန်တယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ ငယ်စဉ်က ” ဟာ.. ဒီကောင်မလေးနဲ့ငါနဲ့အရာအားလုံးနီးပါး အကြိုက်ချင်းတူတယ်။ ငါတို့တွေ တစ်နေ့မှာ ရည်းစားဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့Crush နဲ့ ကိုယ် အကြိုက်ချင်းတူရင် တွေးမိတဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေပါ။ တစ်ကယ်တော့ ထိုအရာဟာ ဟာသပျက်လုံးတစ်ခုသာသာပါပဲ။“I don’t want to get over her. I want to get her back.” Tom ရဲ့ မောျ်လင့်ချက်နဲ့ရှင်သန်ပုံကို သူ့ရဲ့စကားတွေကနေပြီး ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းခံစားပေးခဲ့ကြတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော်တို့ချစ်သူတွေနဲ့ပြတ်စဲသွားပြီးကြတဲ့အခါ ယောင်္ကျားလေး အများစုဟာ ထို မိန်းကလေးတွေကို တော်ရုံနဲ့မမေ့နိုင်ကြပါဘူး။ ဝေးကွာသွားမှ ပို၍ တမ်းတလာတတ် ကြ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုမိန်းကလေးတွေကို ပြန်လည် ရရှိအောင် ကြိုးစားတတ်ကြပြန်ပါတယ်။“Look, I know you think she was the one, but I don’t. Now, I think you’re just remembering the good stuff. Next time you look back, I, uh, I really think you should look again.” ဒီစကားလေးကိုလည်း ထိုကလေးမလေးက Tom ကို အားပေးတဲ့ စကားပြောခဲ့တာပါပဲ။ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးစကားတွေမှာ ဒီစကားလေး ပါဝင်နေတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော်တို့မိမိကို ထားသွားတဲ့ ချစ်သူတွေကို တမ်းတနေမိတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုပဲ ရွေးပြီးစဉ်းစားမိနေလု့ိ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေ ခံစားနေ အသည်းကွဲနေရတာပါ။ တစ်ကယ်လို့သာ ဖြစ်ရပ်တွေ အကုန်လုံးသာ ကျွန်တော်တို့ပြန်မြင်ယောင် စဉ်းစားခြင်းဟာ ထိုထားသွားတဲ့ လူတွေကို မေ့ပျောက်နိုင်ဆုံး ဖြေဆေးတစ်ခုပါပဲ။“Robin is better than the girl of my dreams. She’s real.” ဒီစကားသည် မှန်သလားဆိုရင် အရမ်းမှန်တယ်။ မိမိစိတ်ကူးထဲက ဖြစ်ချင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေထက် မိမိနဲ့ယခုချစ်သူဖြစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးက ပို၍ သာပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ သူမက စိတ်ကူးထဲက မဟုတ်ပဲ ပြင်ပလောကမှာ ရှိနေသည့်အတွက်။ တွေးကြည့်လေ နားလည်လာစေပဲ။“I love us.” ဒီစာသားလေးက မိမိကိုယ်ကို ချစ်ခြင်းလည်း မဟုတ်။ မိမိရဲ့ကောင်မလေးကိုချစ်ခြင်းလည်း မဟုတ်။ မိမိတို့နှစ်ဦးအတူတကွ ရှိနေခြင်း မိမိတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်းဆိုတာကို အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အလှပဆုံး အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။“So, what if I’d gone to the movies? What if I had gone somewhere else for lunch? What if I’d gotten there 10 minutes later? It was – it was meant to be. And… I just kept thinking… Tom was right.” အချစ်ဆိုတာ ဖူးစာဆိုတာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ပြောကြားသွားခဲ့တဲ့ Summer ရဲ့ပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့ အမြင်ကို သူမ ပြောကြားသွားခဲ့တဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်း။” Most days of the year are unremarkable. They begin, and they end, with no lasting memories made in between. Most days have no impact on the course ofalife. May 23rd wasaWednesday.”
“Tom walked to her apartment, intoxicated by the promise of the evening. He believed that this time his expectations would align with reality…”“There’s only two kinds of people in the world. There’s women, and there’s men. Summer Finn wasawoman.”“If Tom had learned anything… it was that you can’t ascribe great cosmic significance toasimple earthly event. Coincidence, that’s all anything ever is, nothing more than coincidence… Tom had finally learned, there are no miracles. There’s no such thing as fate, nothing is meant to be. He knew, he was sure of it now.”ဒါတွေက Narrator ဆိုသော ဇာတ်ကြောင်းပြောသူရဲ့စာသားတွေ။ အရမ်းလှပြီး အရမ်းလည်း ကြိုက်တဲ့ စာသားတွေ။“People change, feelings change, it doesn’t mean that the love once shared wasn’t true and real. It simply means that sometimes, when people grow, they grow apart.” ခံစားတတ်သူတွေအတွက် မျက်ရည်လွယ်စေတဲ့ စာသားလေးတစ်ခု။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ အရမ်းကို သဘာဝကျပြီး အရမ်းကို မှန်လွန်းတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ခု။“I just woke up one day, and I knew. What I was never sure of with you.” ဒီစကားလေးက Summer က Tom ကို နောက်ဆုံးတွေ့ကြတဲ့ အချိန်မှာ သူမကိုယ်တိုင်လည်း အဖြစ်မှန်ကို နားလည်သွားစေခဲ့တဲ့ စကား။ Tom ကိုလည်း အမှန်တရားကို သိသွားစေခဲ့တဲ့ စကား။ သူမဘာကို ပြောတယ်ဆိုတာ ကြည့်ဖူးသူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ဒီအခန်းလေးမှာ သူမ ဒီစကားကို ပြောထွက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ မျက်နှာတစ်ဘက်ကို လွှဲပြီး မျက်လုံးအိမ်မှ မျက်ရည်တွေ ဝဲသွားတဲ့ Tom လိုပဲ ကျွန်တော်လည်း မျက်ရည်တွေ ဝဲခဲ့ရပါတယ်။ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သော Summer သည် နောက်ဆုံးဇာတ်သိမ်းအထိ Tom အပေါ်ခံစားချက်ကို မပြောင်းလဲသွားခဲ့ပေ။ဆဌမ အချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် Expectation နဲ့Reality ကို ယှဉ်ပြသွားတဲ့ scene လေး။ အရမ်းကို ထိမိပြီး အရမ်းကို ယုတ္တိဆန်ပြီး အလွန် ခံစားစေတဲ့ scene လေး။ ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာ ဘယ်တော့မှ မေ့ပျောက်မရတဲ့ scene လေးတစ်ခု။ လူတိုင်းဟာ အရာတစ်ခု လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် မျှော်လင့်ချက်ကလေးတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ရည်မှန်းချက်က အလုပ်တစ်ခုကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာ။ ဒါပေမဲ့ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေက မျှော်လင့်ချက်ကလေးတွေနဲ့ရှင်သန်တတ်ကြတယ်။ ဒါကို ဒီရုပ်ရှင်က ပြသသွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကလေးတွေတိုင်းဟာ လက်တွေ့ဘဝတွေမှာ တစ်ခါတစ်ရံ ကွဲပြားသွားတတ်ကြတယ်ဆိုတာ ဒီကားမှာ ပြထားတဲ့ scene လေးက အရမ်းကို ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းလှပါတယ်။သတ္တမ နှစ်သက်မိတဲ့ အချက်ကတော့ နောက်ခံ Soundtracks တွေ။ တစ်ကားလုံးကို Soundtracks ကောင်းကောင်းတွေနဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို မှတ်မိသလောက် ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီ (500) Days of Summer ရယ် The Boat that Rocked aka. Pirate Radio ရယ် Forrest Gump လောက်ရယ်ပဲ မှတ်မိတယ်။ Soundtracks တွေကို အရမ်းကြိုက်လို့Soundtracks အခွေကို ဝယ်ပြီး နားထောင်လာတယ်။ The Smiths, Regina Spektor, The Temper Trap, Simon & Garfunkel နဲ Carla Bruni တို့ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့Favorite အဆိုတော်တွေ စာရင်းထဲကို ဝင်မှန်းမသိ ဝင်ရောက်လာမိကြတယ်။ ထို့အပြင် The Graduate ရုပ်ရှင်ကို မကြည့်ရသေးတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ထိုရုပ်ရှင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးကာ မဖြစ်မနေ ရှာကြည့်စေခဲ့တဲ့ အထိပါ။အဠမအချက် နှစ်သက်မိတဲ့ အချက်ကတော့ Locations ရွေးချယ်တဲ့ သူတွေပဲ တော်တာလား? Cinematographer ကပဲ တော်တာလား? Director ကပဲ တော်တာလားတော့ မသိပါ။ Downtown Los Angles ကို လှအောင် ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ကြပြန်ပါသေးတယ်။ အခန်းတိုင်း အခန်းတိုင်းသည် လှပသေသပ်ကာ စကားလုံးများဖြင့် မဖော်ပြနိုင်လောက်အောင် အမြင်ဆန်းသစ်နေလွန်းသည်။နဝမ အချက်ကတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကို ထပ်ခါထပ်ခါ သေသေချာချာ ကြည့်လာရင် သတိထားမိမှာကတော့ scenes တော်တော်များများမှာ Director သုံးထားသော အရောင်သည် အပြာရောင်များလွန်းသည်။ Wardrobe တွေမှာ ပိုများပါတယ်။ ပြချင်တာကတော့ ထိုအရောင်က Summer ရဲ့မျက်လုံးအရောင် အပြာရောင်ကို ဆက်စပ်စေနေတာဖြစ်ပြီး သဘောကတော့ Tom ရဲ့သူမအပေါ်ထားရှိတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်တွေ နားလည်စေချင်တဲ့သဘောပါ။ Tom ရဲ့နေရာမှာ ဝင်ပြီး မသိမသာ ခံစားလာစေတဲ့ သဘောပါပဲ။နောက်ဆုံး ဒသမ အချက်ကတော့ ဒီဇာတ်ကားသည် အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ အချစ် အကြောင်း ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ “This is notalove story, this isastory about love.” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် Poster မှာဖော်ပြထားတဲ့ စာတန်းကလေးကိုပဲ။ လေးလေးနက်နက်တွေးတော ကြည့်ရင် ဘာကို ဆိုလိုချင်သလဲဆိုတာ နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။Director Marc Webb ရဲ့ပထမဆုံး Director အဖြစ်ပွဲဦးထွက် ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး ကျွန် တော့်အမြင်မှာ ထို Director ရော မင်းသား Joseph Gordon-Levitt ရော မင်းသမီးဖြစ်သူ Zooey Deschanel တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားလေး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Rotten Tomatoes မှာလည်း 86% တောင် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုအချက်တွေကြောင့် (500) Days of Summer သည် ကျွန်တော့်ရဲ့Personally အရ အနှစ်သက်ဆုံး Romantic Comedy ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်လာပါတော့တယ်။
အဆင့် ၁၃ ခုပါတဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ကစားပွဲတစ်ခု ..
တစ်ဆင့်နိုင်တိုင်း ငွေတွေ အများကြီးပေးတယ် ။ ၁၃ ဆင့်လုံးနိုင်ရင်တော့ သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်ပြီပဲ ။ ခိုင်းသူက ဖုန်းနဲ့ ကြံကြံဖန်ဖန် ခိုင်းတယ် ၊ လုပ်ရသူက ခက်ခက်ခဲခဲ အရူးတစ်ယောက်လို လုပ်ရတယ် ။
အဲလစ် ဘရန်ဒယ် …
အလုပ်ကပြုတ် ၊ ညီဖြစ်သူက ဉာဏ်ရည်မမှီ ၊ မိန်းမက တစ်ဘက်နဲ့ ငွေကြေးမပြေလည်ဘူး ။ ဘရန်ဒယ်က ငွေလိုတော့ ကစားပွဲကို ဝင်ကစားမိတယ် ။ ကစားပွဲကြောင့် တစ်ဆင့်အောင်တိုင်း ပြစ်မှုအကြီးစား ကျုးလွန်မိတာအကြိမ်ကြိမ် ။ ဘရန်ဒယ် ၁၃ ဆင့်လုံး အောင်ပါ့မလား ။ သူနဲ့ အတူ ဘယ်သူတွေ ကစားနေမလဲ ။
မေးခွန်းလေးတစ်ခုလောက်မေးပါရစေဒီမေးခွန်းက သိပ်ကိုရိုးရှင်းပေမဲ့ တကယ်တမ်းပြန်ဖြေဖို့ရယ် လက်တွေ့လုပ်ဖို့ရယ်က မရိုးရှင်းတော့ဘူး မေးခွန်းလေးကတော့……သင့်ရဲ့ အသက်ရှင်သန်ခွင့်၂၄နာရီပဲ ရှိတော့မယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲ….ရင်ဆိုင်ရမဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲ
အဓိက နဲ့ သာမညဆိုတာ ဘယ်လိုခွဲမလဲဒီကားက ကြေးစားလူသတ်သမားတစ်ယောက်အကြောင်းကို ရိုက်ပြထားတယ် သူဟာ ကြေးစားပီပီ ထက်မြက်တယ် တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ကျွမ်းကျင်တယ် တစ်နေ့တော့ ကြေးစားအလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ်မှာ တစ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကြောင့် သူသေဆုံးသွားတယ် ဒါပေမဲ့ ဆန်းကြယ်တာကသူ့အလုပ်ရှင်က သူ့ကို အသက် ၂၄ နာရီပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်…. ကဲ သူဘာတွေဆက်လုပ်မလဲ… ဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်မလဲ …..
Twisted Psycho Ex-Girlfriend (2018)
ကိုရီးယားကားတွေမှာ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကြည့်ဖူးကြတယ်ဟုတ်…ဒီကားမှာလည်း သုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းမျိုးကိုဘာဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ ဖီလင်မျိုးနဲ့ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမှာပါ…ကာရာ ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာ
စိတ်ကျန်းမာရေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးလူတွေကိုကူညီတတ်တဲ့ စိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ..သူ့ရဲ့ရည်းစားကတော့ တိုင်လာ ဆိုတဲ့အမျိုးသားဖြစ်ပြီး တိုင်လာ့ကိုလဲ မူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့ဘဝက
နေ ကာရာ ကကယ်တင်ထားတာပါ…သူတို့နှစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အချစ်စစ်တွေနဲ့အရမ်းချစ်ကြပြီး လက်ထပ်ကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတိုင်လာ့ရဲ့အရင်ရည်းစားဖြစ်တဲ့ အစ္စဘယ်လာ ဟာသူတို့ရဲ့ဘဝထဲကိုဝင်
ရောက်လာပါတော့တယ်…ကဲသူတို့သုံးယောက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့..စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော်..ဤဇာတ်ကားကို May Thu မှဘာသာပြန်ပေးပြီးအညွှန်းကိုလဲ ကိုယ်တိုင်ပဲရေးပေးထားပါတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ဝန်းကျင်လောက်တုန်းက DC2က ရုပ်ရှင်ရုံမှာ 3D ပြသခဲ့တုန်းကဝက်ဝက်ကွဲကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းသရဲကားတစ်ကားပါ..အခုချိန်မှာရော ရုံမှာပြန်ကြည့်သလိုမျိုးအသံကွာလတီ ကောင်းကောင်းနဲ့ ခံစားချင်သေးလား..ခံစားချင်သူများအတွက် Bluray 720p 5.1CHနဲ့ ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်
ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကတော့ 407 လေယာဉ်ကြီးဟာ မတော်တဆအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပျက်ကျဖူးပြီးသားလေယဉ်ကြီးပေါ့..တာဝန်ရှိသူက ပေါ့ပေါ့ဆဆ နဲ့ပဲ လေယာဉ်ကိုအသစ်ပြန်ရွိုင်းဆေးပြန်မုတ် ဂျင်းထည့်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံပြန်သန်းဖို့ လုပ်ကြပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့လည်း အရင်တစ်ခေါက်မတော်တဆမှုမှာ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ နယူးဆိုတဲ့လေယာဉ်မယ်လေးကလည်း အဲ့လေယာဉ်မှာပဲတာဝန်ကျပြန်တယ်..အရင်လေယာဉ်ဟောင်းဆိုတာ
ဆေးပြန်မှုတ်ထားတော့သူလည်းမသိဘူးပေါ့..ဒီလိုနဲ့ လေယာဉ်မယ်လေး..စက်ပြင်ဆရာခရီးသည်တစ်ခု..မကျွတ်လွတ်သေးတဲ့ သရဲတွေတအုပ် ဘယ်လိုဆက်ပြီးစခန်းသွားကြမလဲဆိုတာရင်ခုန်စွာနဲ့ နားကြပ်တပ်ပြီး ကောင်းကောင်း ကြည့်လိုက်ပါ
ဖြစ်ရပ်မှန် Survivalကားကောင်းလေးတွေကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက်6Below Miracle on the Mountain(2017)ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အရာအားလုံးဆုံးရှုံးပြီးမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာ အတော်မျာ
းများကတော့ လက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်ကြတာပါပဲ။ဒါကပဲ အောင်မြင်သူ နဲ့ ရှုံးနိမ့်သူဆိုတဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်လာစေတယ်ပြောရမှာပဲ။ငယ်စဉ်ကတည်းကဝါသနာပါခဲ့တဲ့ ဟော်ကီအားကစားလောကမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့Ericတစ်ယောက် နှင်းလျှောစီးဖို့တောင်တစ်ခုမှာအနားယူနေခဲ့တာပါ။သူနှင်းလျှောစီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာနှင်းမုန်တိုင်းကျလာခဲ့ပါတော့တယ်။
လမ်းပျောက်သွားခဲ့ပြီးခက်ခက်ခဲခဲ အသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကိုရိုက်ပြထားတဲ့ကားကောင်းလေးပါ။စိတ်ဓါတ်ကျနေချိန် ဒီကားလေးနဲ့ ခွန်အားယူလို့ရပါတယ်လို့ပဲ ညွှန်းလိုက်ပါရစေ။
’71(2014)IMDb….7.2,,,Rotten….95(((ဆုပေါင်း (၁၂)ဆု ရရှိခဲ့ပြီး အခြားဆုများအတွက် ဆန်ကာတင်(၂၅)ဆုစာရင်းဝင်ခဲ့….)))ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ တိုက်လိုခိုက်လိုစိတ်ပျင်းပြပြီးရန်လိုတဲ့သူတွေမဟုတ်တဲ့အပြင် တခြားသူဒုက္ခရောက်နေမှပျော်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ကြဘူး…သို့ပေမယ့် ဒီလိုအရာတွေနဲ့မကင်းတဲ့ စစ်ကားတွေကို လူကြီးလူငယ်မရွေးဘာကြောင့်ကြိုက်ကြတာပါလိမ့်……
တခြားနိုင်ငံမှရိုက်သည့်စစ်ကားအများစုသည် အဆဲမျိုးစုံပါဝင်သလို အထက်အောက် ပုံစံပေးနည်းမျိုးစုံပါဝင်လေသည်…သို့ပေမယ့် စစ်မြေပြင်ရောက်လျှင်သော်လည်းကောင်း ဒုက္ခမျိုးစုံသော်လည်းကောင်းကြုံသည့်အချိန်မျိုးတွေ အတူပူပေါင်းဖြေရှင်းသည့်ပုံစံများမှာကျွန်တော်တို့ကို လွန်စွာမှဆွဲဆောင်နိုင်ပါသည်…ဥပမာ Jarhead (2005) တပ်သားသစ်ဘဝကိုစရိုက်ပြတာ ..ဆဲတာလည်းစုံ ပညာပေးနည်းလည်းစုံ မီးကြောင့်ရဲရဲနီသည့် သံကွင်းနဲ့တောင်ထိုးကြသေးတယ်..သို့ပေ
မယ့် နောက်ဆုံးခန်းရောက်တော့ ကျွန်တော်တို့မျက်ရည်စို့ရတယ်..နောက် Fury (2014) အချင်းချင်းမှဆဲချက်ပေါက်ကရပြောချက်..အသစ်ကောင်လေးကိုလည်းပုံစံပေးချက်က မညှာတာ….သို့ပေမယ့် ဒီလူ့အရိုင်းအစိုင်းလို စစ်သားကြီးတွေက ကျွန်တော်တို့ကိုမျက်ရည်စို့ခဲ့ရတယ်..အခြားစစ်ကားကောင်းများစွာရှိပါသေးသည်…မည်သို့ပင်ဆိုစေ ကျွန်တော်တို့ဆီက စစ်ကားရိုက်ပြီဟေ့ဆိုရင်လည်း တခြားမြန်မာကားများထက် စိတ်ဝင်တစ်စားစောင့်ကြည့်ရတာ
အမော….အားမလိုအားမရဖြစ်ခဲ့ကြတာကလည်းတစ်ပိုင်းပေါ့လေ..ခုလည်း စစ်ကိုမုန်း၍ တိုက်ခဲ့သည်နောက်ပိုင်း ရေတပ်နှင့်ဆိုင်သည့် စစ်ကားတစ်ကားရိုက်နေသည်ဟုကြားသိရသည်…ထားတော့….’71(2014)ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကိုအတိုချုံးပြောရမယ်ဆိုရင် တပ်ရင်းတစ်ရင်းဟာ ကက်သလစ်ဂိုဏ်းအဖွဲ့အထိကရုဏ်းဖြစ်တဲ့ Belfast မြို့ကို အရေးပေါ်လုံခြုံရေးသွားယူရတယ်..အဲ့ဒီလုံခြုံရေးယူတဲ့ထဲမှာ သင်တန်းဆင်းခါစ ရဲဘော်သစ်တွေပါတယ်…တစ်နေ့လုံခြုံရေးယူပေးနေရင်း
စစ်သည်တစ်ယောက် အသတ်ခံလိုက်ရတယ်….တခြားသူတွေတော့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်..လွတ်မြောက်သွားတဲ့အထဲမှာ တပ်သားသစ် ဟွတ်ခ်ဆိုတဲ့သူလည်းပါတယ်..သူဟာ ထွက်ပြေးနေတုန်းမှာ သူလုံးဝမမျှော်လင့်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်..ကိုင်း သူတွေ့ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ…ဒီရဲဘော်သစ်လေး ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး…..ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့Zwel Zan Aung ပဲဖြစ်ပါတယ်…
When9(Elijah Wood) springs to life, it finds itself inapost-apocalyptic world where humans no longer exist, and the only signs of life are sentient rag dolls like itself and the machines that hunt them. Though it is the youngest of the group,9convinces comrades that the only way to survive aga
Director: Rapeepimol Chaiyasena ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီး
13 September 2012 (Thailand) မှာ ရုံတင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းသရဲကားဖြစ်ပါတယ်… ဇတ်လမ်း ပုံစံကတော့ လက်ထပ်မယ် ပြောထားတဲ့ ချစ်သူက ကားမှောက်သေပြီလို့ ကြားပြီး တိုက်ပေါ်က ခုန်ချသွားတဲ့ မိန်းမချောလေး…. မသေခင်က သူမ
ကို ကျိတ်ကြွေနေတဲ့ ထမင်းဆိုင်က ကောင်လေးကတော့ ကောင်မလေး တိုက်ပေါ်က ခုန်ချ သေသွားပြီးနောက်မှာ သူမ ရဲ့ အတွင်းခံ အဝတ်ကို ခိုးယူထားတာ စိတ်မသန့်လို့ ပြန်သွားအထား အခန်းရှေ့မှာပဲ ပျောက်ဆုံးသွားတယ်…. သေခါနီး
ကင်ဆာ ရောဂါသယ် တစ်ယောက်ကလဲ ထိုအခန်းကို လာအငှား မစားသင့်တဲ့ သေသူကို ပူဇော်တဲ့ အစား စားမိလို့ အသေဆိုးနဲ့ သေရပြန်… ချစ်သူ ဆိုတဲ့ လူရဲ့ အလိမ်စကား ကို ပြောပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း ဆိုတဲ့ မိန်းမလဲ ကားမှောက်ပြီး သေပြန်တယ်…. နောက်ဆုံး သူ လိမ်ညာမိလို့ သေသွားတဲ့ ကောင်မလေး အသုဘ ကို ရောက်လာတွေ့တဲ့ ကောင်လေးလဲ နောက်နေ့ မနက် ကားပဲ မြင်ရပြီး လူကတော့ ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးသွားပြန်တယ်….
A Brand New Life ဇာတ်ကားဟာဆိုရင် IMDb ratting 7.6 အထိ
ရရှိထားပါတယ်…မိဘရဲ့ စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရပြီး မေတ္တတရားငတ်မတ်နေတဲ့
ဇာတ်လမ်းအစမှာတော့ ဖခင်ဖြစ်သူက သူ့သမီးလေးဂျင်ဟီးကို မိဘမဲ့ဂေဟာမှာ
တနေ့ကျရင် ပြန်လာခေါ်မယ်လို့ တထစ်ချယုံကြည်နေတဲ့ ဂျင်ဟီး
စကားတလုံးကို ယုံကြည်နေတဲ့ဂျင်ဟီးရဲ့ မျော်လင့်ချက်တွေဖြစ်လာပါ့မလား…
မိဘမဲ့ဂေဟာမှာ လာရောက် မွေးစားမယ့်သူကို စောင့်နေကြတဲ့ကလေးတွေများနေပေမယ့်
ဂျင်ဟီးတယောက်ကတော့ သူ့အဖေတယောက်တည်းကိုသာ စောင့်မျော်နေရင်း….
ဒီဇာတ်ကားမှာ ကလေးတွေရဲ့ ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်ထားချက်ကြောင့်
ဇာတ်လမ်းရဲ့ ရသရော ပေးချင်တဲ့ မတ်ဆေ့ရောကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ရမှာပါ(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ.ဘာသာပြန်သူကတော. Aung Pyay ဖြစ်ပါတယ်)
IMDb 6.8 ရထားပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထွက် သဲထိပ်ရင်ဖို ဒရာမာကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဇာတ်ကားထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသားတွေကတော့အရင် မြဝတီကလွင့်တဲ့ ရုပ်သံစီးရီးတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေကျ မင်းသားတွေဖြစ်တာကြောင့် ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့ စိမ်းမှာ မဟုတ်ပါဘူးဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ နှလုံးအထူးကု ပါမောက္ခဒေါက်တာ ကင်ဂျွန်ယောင်းဟာနိုင်ငံခြားမှာ ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်လုပ်အားပေးလုပ်ကိုင်ပြီးတဲ့အတွက် ကိုရီးယားသို့ပြန်လာပြီးသမီးလေးအင်ဂျွန်နှင့် ချိန်းထားသောနေရာကိုသွားတဲ့လမ်းမှာကားမတော်တဆမှုတစ်ခုကိုတွေ့ပြီးဝင်ကူညီရာ ကားဖြင့်အတိုက်ခံရသောသူမှာသူ့သမီးလေးဖြစ်နေပါတယ် သို့သော် ရုတ်တရက် အိပ်မက်မက်သလိုဖြစ်ပြီး့ နိုးထလာကာ ခုနက အဖြစ်အပျက်များအတိုင်း အဖန်တလဲလဲ ဖြစ်ပေါ်နေပါတော့တယ်သူ့သမီးကားတိုက်ခံရသည်ကိုခဏတိုင်း တွေ့မြင်နေရသောကြောင့် ငရဲကျနေသကဲ့သို့ခံစားချက်များဖြင့် ပူပင်သောကရောက်နေရပါတော့တယ်ကဲ ဒေါက်တာကင်တစ်ယောက် ဒီဖြစ်ရပ်ဆန်းကနေ ဘယ်လို ရုန်းထွက်မလဲဒီဖြစ်ရပ်ဆန်းကြီးကကော ဘာကြောင့်ထပ်တလဲလဲ ဖြစ်နေတာလဲဒေါက်တာကင်ကတော့ ဒီဖြစ်ရပ်ဆန်းကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာကိုတော့ပရိတ်သတ်ကြီးကဆက်လက်ကြည့်ကြရမှာပါ
ဒီ ပြင်သစ် 3D animation ရုပ်ရှင်က ဒါရိုက်တာ Bibo Bergeron ရဲ့လက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆိုရင် ရုပ်ရှင်ပြစားတဲ့ အေမီယိုနဲ့ ကုန် ပစ္စည်းတွေလိုက်ပို့တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်တဲ့ ရာအိုသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာ မမျှော်လင့်ပဲ ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ကို ဖန်တီးမိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကောင်ဟာ ပဲရစ်မှာလျှောက်သွားပါတော့တယ်။ တွေ့တဲ့လူတိုင်းကသူ့ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌန်ကြောင့် ကြောက်လန့်တကြားဖြစ်ကြတာပေါ့။ အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကို ဖမ်းဆီးဖို့အတွက် ကောက်ကျစ်တဲ့ ကော်မရှင်နာ မေနာက စတင်ပြီးလုပ်ပါတော့တယ်။ ရေကြီးမှုပြဿနာကို ဘာမှအကူအညီမပေးတဲ့အတွက်သူ့ကို ပြည်သူတွေအထင်လွဲမုန်းတီးနေတာကနေ ဖြေရှင်းဖို့အကြောင်းရှာတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီမကောင်းဝါးကောင်လေးမှာ ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီစွမ်းရည်လေးကြောင့်ပဲ မကောင်းဆိုးဝါးကောင်လေးက ပဲရစ်မှာရှိတဲ့ သူဌေးတွေသာ လာလို့ရတဲ့ ကပွဲရုံတစ်ခုကိုရောက်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ အဆိုတော်မလေး လူစီလီနဲ့တွေ့ဆုံရပါတော့တယ်။ လူစီလီက သူ့ကိုနာမည်လေးတစ်ခုပေးပြီး ကပွဲရုံမှာ တိတ်တဆိတ်ခေါ်ထားပေးပါတယ်။ သူဟာ ပုံသဏ္ဌာန်ကသာမကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်နေပေမယ့် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ထိခိုက်စေတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ တခြားအမြတ်ကြီးစား ကိုယ်ကျိုးကြည့်တဲ့လူသားတွေလိုမျိုး မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီဇာတ်ကားလေးက ခံစားကြည့်မိမယ်ဆိုရင် တကယ့်မကောင်းဆိုးဝါးဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ အပြင်ပန်းကိုသာ ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့ ကိစ္စတွေ အဖြစ်အပျက်တွေကို တွေ့ရမှာပါ ဒါ့အပြင်ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ပါတဲ့သီချင်းလေးတွေကလဲကောင်းတာမို့ စာသားတွေကိုလည်း ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ A Muse ဆိုတဲ့တောင်ကိုရီးယားကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် စာရေးဆရာ Park Bum-shin ရဲ့ Eun-gyo ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကို ဇာတ်လမ်းအဖြစ် ဒါရိုက်တာ Ji-woo Jung ကရိုက်ကူးထားတာပါ အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေ အနေနဲ့တော့ Park Hae-il, Kim Mu-yeol နဲ့ Goblin ကားရဲ့ မင်းသမီးလေး Kim Go-eun တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အသက် ၇၀ အရွယ် ကဗျာဆရာအိုကြီးရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါ သူ့မှာ အသက် ၃၀ အရွယ် သူ့အချစ်ဆုံးသဘောအကျရဆုံး တပည့်တစ်ယောက်ရှိပါတယ် တစ်နေ့မှာ ကဗျာဆရာကြီးဟာ မမျှော်လင့်ဘဲ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် အထက်တန်းကျောင်းသူလေးနဲ့ ချစ်မိသွားပြီး သူ့အကြောင်းကို ဝတ္ထုတိုလေးရေးဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ် သူ့တပည့်က မနာလိုဖြစ်ပါတော့တယ် ဒီလိုနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝထဲကို အထက်တန်းကျောင်းသူလေး ဝင်ရောက်လာချိန်မှာ သူတို့ရဲ့စိတ်တွေ လိင်အာသီသတွေဟာ နိုးကြားလာခဲ့ရာက ဘာတွေဆက်ဖြစ်ဦးမလဲဆိုတာတော့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါဦး (18+ အခန်းအချို.ပါဝင်တာကြောင့်မိသားစုနဲ့အတူကြည့်ဖို့မသင့်တော်ပါဘူး)
Horror ကားကြိုက်သူတွေအတွက် အိပ်မက်ထဲက
သူသည် အလကားသက်သက် ဖရက်ဒီဆိုတဲ့ နာမည်ကြီး
ကော်ဖီဆိုင်တခုထဲမှာအိမ်မက်မက်နေတဲ့ ဒင်းန် တယောက်
နောက်ပိုင်းမှာ ခရစ်ကလည်း ထိုအိမ်မက်တွေမြင်မက်..
ဆိုပြီး ကြားထဲက ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုကို
နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ ကွမ်တင် နဲ့ နန်စီ တို့
mmbusticket IMDb Rating 7.9Rotten Tomattoes 94% အထိ ရထားတဲ့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့သမိုင်းဝင် ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းရေးအတွက် အရမ်း အရေးပါတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းမို့ ကိုးရီးယားမှာ သမ္မတကိုယ်တိုင် လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သလို ကိုးရီးယားလူဦးရေရဲ့ ၅ပုံ၁ပုံလောက်ကို ရုပ်ရှင်ရုံမှာ လာရောက်အားပေးလို့ ရုံတင်ချိန် အကြာဆုံး ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကားအကြောင်းမပြောခင် ကိုးရီးယားသမိုင်းကြောင်းလေး အနည်းငယ် ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဂျပန်လက်အောက်က လွတ်လပ်ရေးရပြီး 16 နှစ်တိုင်တိုင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၇၉ အောက်တိုဘာမှာ အရင်သမ္မတ လုပ်ကြံပြီးဒီဇင်ဘာမှာ စစ်တပ်ကပဲ စစ်အာဏာသိမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးသမားတွေ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေးပေးဖို့ လှုပ်ရှားဆန္ဒပြလာကြလာကြလို့ အခြေအနေတင်းမာလာလို့ Martial law ပြဌာန်းပြီး အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခဲ့သလို တက္ကသိုလ်ကျောင်း
တွေ ယာယီပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။သတင်းတွေလည်း အမှောင်ချထားလိုက်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့မြို့တွေ အလွယ်တကူ ထိန်းချုပ်နိုင်ပေမယ့် ဂွမ်ဂျူးမြို့က တစ်မြို့လုံး စည်းလုံးညီညွှတ်တာကြောင့် ထိန်းချုပ်ရခက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့် မြို့ကို ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ် မြို့အဝင်အထွက်ကိုပိတ် သတင်းတွေအမှောင်ချထားခဲ့ပါတယ်။မြို့က ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလည်း အကြမ်းဖက်စစ်အင်အားသုံးဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂွမ်ဂျူးမြို့သူမြို့သားတွေကတော့ အရံှူးမပေး ရဲရဲတောက် မြို့
လုံးကျွတ်မျှ အသေခံ ဆန္ဒပြဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမြို့က သတင်းကို ကမ္ဘာသိအောင် ဂျာမန်သတင်းထောက် သက်စွန့်ဆံဖျားလာပြီး တက္ကစီသမားတစ်ယောက် အကူအညီနဲ့ ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ပြီး သတင်းထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကြောင့် ကျန်တဲ့ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးလည်း ပါဝင်လာတာကြောင့်နောင် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် တွန်းအားပေးခဲ့သည့်မြို့လေးဖြစ်ခဲ့သည်။အခု ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ တက္ကစီသမား မစ္စတာကင်က ဂျာမန်
သတင်းထောက်ကို ဂွမ်ဂျူးမြို့ဆီ လိုက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။နိုင်ငံရေးစိတ်မဝင်စားတဲ့ ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ့်အလုပ်အကြောင်းသာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ကားသမားတစ်ယောက်တက်တက်ကြွကြွနဲ့ သတင်းအမှန်တွေတင်ဆက်ပေးဖို့ စိတ်ထက်သန်တဲ့ ဂျာမန်သတင်းထောက်တစ်ယောက်ကို ပိုက်ဆံအများကြီးရမှာမို့ အော်ဒါမှာထားတဲ့ကားလိုလိုနဲ့ ဖြတ်ခုတ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားကို အင်္ဂလိပ်စာ မတတ်တခေါက်နဲ့ ဂွမ်ဂျူးကို လိုက်ပို့ပေးရင်း…………………..ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်လိုက်ပါသင်ခန်းစာယူတတ်ရင် အများကြီးကို ပေးသွားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ
ချစ်စရာ ကာတွန်းကားလေးလာပါပြီအရမ်းရယ်ရသလိုအနှစ်သာရရှိတဲ့ကားလေးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ကြောင်တစ်ကောင်ကြောင့်စာကလေးမိသားစုအသိုက်အမြုံလေးပြိုကွဲခဲ့ရပြီးတော့ တစ်ကောင်ငှက်ဘဝရောက်ဖို့လက်တစ်လမ်းအလိုမှာပဲရစ်ချက်လို့ခေါ်တဲ့စာကလေးငချွတ်လေးက ငှက်ကျားတွေရဲ့မွေးစားခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ် ဘယ်လောက်ပဲ အံဝင်ကျအောင်နေနေ အချိန်ကစကးပြောလာတဲ့တစ်နေ့မှာတော့ ငှက်တို့ရဲ့ဘာသာဘာဝမတူညီတာ
ကြောင့်ငှက်ကျားမိသားစုက အာဖရိကကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာ စာကလေးဆိုတဲ့အမျိုးက ရွှေ့ပြောင်းတတ်တဲ့အမျိုးမဟုတ်တာကြောင့်ရစ်ချက်လေးကိုထားခဲ့ရတော့တာပေါ့ အရူးမီးဝိုင်းပြီးကျန်ခဲ့တာက ချာတိတ်လေးရစ်ချက်ပါ မိသားစုနဲ့ခွဲနိုင်တဲ့အင်အားမရှိတာကြောင့်ငှက်ကျားမိသားစုကိုရှာဖို့အာဖရိကကိုအမှီလိုက်လာခဲ့ပါတယ်
အာ့လိုနဲ့လမ်းမှာမုန်တိုင်းမိပြီး အိုဂါဆိုတဲ့ဘဝတူဇီးကွက်မလေးနဲ့ဆုံပြီးအဖာ်ရသွားခဲ့ပါတယ် အိုဂါလေးအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အထီးကျန်ရင်းစိတ်မမှန်တဲ့ဝေဒနာကိုယဉ်ယဉ်ကျေးခံစားနေရတဲ့ဇီးကွက်သေးမျိုးရင်းဝင်တစ်ကောင်ပါ ဒီလိုနဲ့ရှေ့ဆက် လမ်းမှာဘယ်လိုတွေတိုင်ပတ်မလဲ ဘယ်လိုဗရုတ်ကျတဲ့ဘော်ဒါတွေနဲ့ဆုံလာဦးမလဲ ရစ်ချက်လေးကကောသူသွားချင်တဲ့မိသားစုဆီသွားခွင့့်ရမလားဆိုတာကတော့ စိတ်မကောင်းစရာဇာတ်ကြောင်းလေးကိုဟာသလေးတွေနဲ့ဖြေဖျောက်ရင်းကြည့်ကြရအောင်ဗျာ…
mmbusticketCurse Accident ဇာတ်ကားဟာ 2017၊ ဒီဇင်ဘာလထဲမှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သည်းထည်းရင်ဖိုစရာဇာတ်ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းကလေးကတော့ မိန်းမချောလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျက်ဇ်နဲ့ကယ်လ်ရိုလင်းတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာ ဂီတပွဲတော်တစ်ခုကိုသွားဖို့အတူတူထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်။ဂီတပွဲတော်ကိုသွားဖို့ ဘတ်စ်ကားနဲ့မသွားပဲ သူငယ်ဖြစ်သူတွေရဲ့ကားနဲ့လမ်းကြုံလိုက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်းသူငယ်ချစ်ဖြစ်သူတွေက မလာခဲ့တဲ့
အခါမှာတော့ ဂျက်ဇ်နဲ့ကယ်လ်ရိုလင်းတို့နှစ်ယောက် အခက်တွေ့ရပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ နှစ်ယောက်သား ကြုံရာကားနဲ့သာလမ်းကြုံလိုက်ဖို့စီစဉ်ရပါတော့တယ်။အဲ့မှာ မထင်မှတ် ကားအကောင်းစားကြီးစီးလာတဲ့ ကောင်လေးချောချောနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ မိချောတို့နဲ့ကိုယ်လူချောတို့တစ်သိုက် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးအတိုင်းခရီးနှင်လာရာမှာတော့ လမ်းမှာမမျှော်လင့်ပဲယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပြီး ကယးဟာလမ်းဘေးက ချောက်ထဲထိုးကြသွားပါတော့တယ်။အဲ့မှာအကူအညီတောင်းစရာလူလည်းမရှိ၊ အကူအညီပေးနိုင်မယ့်သူတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားကာ တောင်စောင်းအောက်ထဲမှာ ပိတ်မိနေပါတော့တယ်။အဲ့လို အကူအညီမယ့်ကယ်ရာမဲ့ဘဝက သူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်လိုရုန်းထွက်ကြမယ်၊မိချောတို့တွေ့ခဲ့တဲ့
ကိုယ်လူချောတို့နှစ်ယောက်ကရော..လူကောင်းတွေမှဖြစ်နိုင်ပါ့မလား…..၊တစ်ခါသာဆုံဖူးသေးတဲ့ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကို သဘောထားကြီးစွာနဲ့ကူညီနိုင်ပါ့မလား….၊ဒီလိုအခက်ခဲတွေထဲကဘယ်လိုရအောင် အသက်ဆက်မလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ ရင်ဖိုစွာရှု့စားရမှာဖြစ်ပါတယ်
1987ခုနှစ်ရဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်လက်တွေ့ဘဝထဲကိုဝင်ပါတော့မယ်ပြသနာကတော့မပြောင်းသွားပါဘူး ဘာအရာမှလည်းမလွယ်ကူခဲ့ပါဘူးသမီးရည်းစားရေးမှာလည်းအသည်းကွဲနေတဲ့ကွဲဘဲလေးဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုလည်းဘာအတွေ့အကြုံမှာမရှိတဲ့ငပေါသာသာပါမိဘတွေကလည်းကျောင်းစရိတ်မပြောနဲ့ မုန့်ဖိုးတောင်မပေးတော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီ
ပိုက်ဆံရှာဖိုလိုလာတဲ့အချိန်မှာ သူ့အားလပ်ရက်တွေကိုAdventurelandလို့ခေါ်တဲ့ကစားကွင်းမှာလုပ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတယ်စုတ်ပြတ်နာကျင်ပြီးအတွင်းပိုင်းသေဆုံးမတတ်ဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကလူတွေအပန်းဖြေ ပျော်ရွှင်ဖို့လာတဲ့ကစားကွင်းမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာအရမ်းကြီးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသလိုပါပဲသူ့စိတ်အခြေအနေနဲ့လူမှုရေး၊အချစ်ရေးတွေကိုကစားကွင်းမှာအလုပ်လုပ်ရင်းဘယ်လိုကျော်ဖြတ်သွားမလဲပုံမှန်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုကြည့်သင်တယ်လို့ထင်ပါ
အခုဇာတ်ကားလေးကတော့ဟောင်ကောင်ဇာတ်လမ်းတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ကြည့်သင့်တဲ့ action-comedy အမျိုးအစားဇာတ်ကားတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့အေးဂျင့်မစ္စတာချန်ဟာ နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ထိပ်တန်းစုံထောက်တစ်ယောက်ပါ။ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲသူကတာဝန်တစ်ခုမှာကျရှုံးခဲ့လို့အဖွဲ့ကနေပြီးထုတ်ပယ်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၂၀လောက်က တာဝန်တစ်ခုကိုထမ်းဆောင်ရင်း သူအသုံးချခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးမမျှော်လင့်ဘဲပြန်တွေ့ခဲ့တဲ့အခါ ထိုအမျိုးသမီးဟာရဲအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအတွက် ထူးဆန်းတဲ့အမှုတွေကိုလိုက်လံဖြေရှင်းပေးရပုံကို ဇာတ်လမ်းဆင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ဟာသဆန်ဆန်စုံထောက်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ။ဟောင်ကောင်ကားလည်းဖြစ် အရှေ့တိုင်းဆန်ဆန်ပျက်လုံးတွေကြောင့်IMDB ratingနည်းပေမဲ့ အားလပ်ရက်မှာ အနားယူရင်းပေါ့ပေါ့ပါးပါးဇာတ်လမ်းလေးကြည့်ချင်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ ကိုမျိုးခန့် ပါ)
Ajin_ Demi-Human (2017)
ပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ဂျပန်ကားတွေကိုမကြိုက်ပါဘူး..မကြိုက်ဘူးဆိုတာထက် အမြဲကြားနေကျဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိမ်းနေတာလည်းပါတာပေါ့..ဒါပေမယ့် ဒီကားလေးကိုတော့ Encode လုပ်ဖို့အတွက်စစ်ရင်းအစမ်းကြည့်ပါတယ်…ကြည့်နေရင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ကားလေးတစ်ကားဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးလည်းခံစားလို့ရအောင်
တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…အညွှန်းလေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်…ဒီကားမှာ အာဂျင်းဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်အကြောင်းကိုပြောပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်…အာဂျင်းကို ဂျပန်ရဲ့မန်ဂါစီးရီးကနေပြန်လည်အသက်သွင်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်…အာဂျင်းဆိုတာက မသေတဲ့လူမျိုးတွေပါ…ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ လူတပိုင်း မိစ္ဆာတစ်ပိုင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်….ဒီအာဂျင်းတွေဟာ လူတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူး…ဒါပေမယ့်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ နည်းပညာတွေအရ အာဂျင်းရဲ့မ
သေနိုင်တဲ့အစွမ်းတွေကို လူသားတွေဟာ စိတ်ဝင်စားလာကြပြီးအာဂျင်းတွေကို ဖမ်းဆီးကာ အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ပြီး သုတေသနတွေလုပ်ကြပါတော့တယ်….ဒါကြောင့်လည်းအာဂျင်းတွေကို ခြေထောက်ဖြတ်လိုက် ဓားနဲ့ဖြတ်လိုက်နဲ့နောက်ဆုံး မြင်မကောင်းတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ ဖြစ်လာရင် reset လို့သူတို့ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့အာဂျင်းတွေကိုသတ်လိုက်ပါတော့တယ်…ခဏကြာရင် အသတ်ခံလိုက်ရတဲအာဂျင်းဟာ ပြန်လည်ရှင်သန်လာပါတယ်…အာဂျင်းရဲ့ အစွမ်းတွေကတော့ ဘယ်လောက်ပဲဒဏ်
တွေရရ လက်ပြတ် ခြေပြတ် သေနတ်မှန် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုသတ်လိုက်တာနဲ့ခဏအတွင်းမှာ ပြန်လည်ရှင်သန်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်…နောက်ပြီးတော့ အာဂျင်းတွေမှာ ကိုယ်ပိုင် အရိပ်လို့ခေါ်တဲ့ မိစ္ဆာတွေတစ်ယောက်ချင်းစီမှာရှိပါတယ်…အဲဒီမိစ္ဆာတွေကို သူတို့ဟာ ထိန်းချုပ်နိုင်ကြပါတယ်…ဒီလိုမျိုးအနှိပ်စက်ခံရတဲ့အာဂျင်းတွေဟာ လူတွေကိုမုန်းတီးလာကြပါတယ်…သူတို့ဟာအစမ်းသပ်ခံမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း လူတွေသိအောင်ပြချင်လာကြပါတယ်…ဒါကြောင့် သူတို့
ဟာ လူသားတွေကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုုပ်ခွင့်နယ်မြေတွေတောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ လူသားတွေကို မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်စတင်ပါတော့တယ်…အာဂျင်းတွေအားလုံးမဆိုးသွမ်းကြပါဘူး…ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းသောအာဂျင်းကတော့စိတ်မနာနိုင်ပဲ လူသားတွေဘက်ကရပ်တည်ပြီးသူရဲ့မျိုးနွယ်တူ အာဂျင်းတွေကို ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ဖို့ အခြေနေဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်…..အားလုံးပဲ ကျန်တဲအရာတွေကိုတော့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား…
June 8, 2018 ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့Alex Strangelove ဆိုတဲ့ဒီကားလေးကတော့Teen film/ Comedy ကားလေးဖြစ်ပါပြီးတော့ အလွန်လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားလေးကိုရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာကတော့ Director Craig Johnsonဖြစ်ပြီးတော့
ဇာတ်ညွန်းကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ပဲရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအဲလက်ထရူးလပ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာအထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ သူနဲ့ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးကလယ်ရာဆိုတဲ့ရည်းစားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ကျောင်းမပြီးခင်သူတို့ရဲ့planကတော့ အဲလက်ရဲ့virginity ကိုသူရည်းစားကောင်မလေးနဲ့အတူဖြတ်သန်းကုန်ဆုံးနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ တခြားမြို့က ချောမော်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဂေးကောင်လေးဖြစ်တဲ့ အဲလီယက်ဆိုတဲ့တစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံးပြီးမှတော့ သူတို့ရဲ့Relationship တွေဘာတွေဆက်လိုရှုတ်ထွေးပြီးဖြစ်လာသလဲဆိုတာကို ဟာသနဲ့ လူငယ်သဘာဝဆန်ဆန်ရောနှောရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Nyi Nyi Lwin ပါ)
All Is Lost(2013)IMDB…6.9,,,,Rotten…94ဒီကားက ဆန်းတယ်လို့ပဲပြောရမလား မသိဘူး တစ်ကားလုံးမှာ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ထဲရယ်…ပြီးတော့ နောက်ခံစကားလေးအနည်းငယ်ကလွဲလို့ တစ်ကားလုံးဘာမှကိုမပြောဘူး….လှေတစ်စီးပေါ်မှာလူတစ်ယောက် အိပ်နေတယ်…ဗြုန်းဆို လှေထဲကိုရေဝင်သံကြောင့်သူနိုးလာတယ်….
.ပင်လယ်ပြင်ထဲက သူ့လှေကိုထူးထူးခြားခြား ဘယ်သင်္ဘောပေါ်ကျခဲ့မှန်းမသိတဲ့ကွန်တိန်နာရဲ့ထောင့်နဲ့လှေရဲ့ဘေးနံရံနဲ့တိုက်မိပြီးပေါက်သွားတယ်…..လှေကိုဖာတယ် ..ရေတွေကိုပြန်ထုတ်တယ်….ဒီကားက imdb ရော rotten ရောအတော်ကောင်းပါတယ်…
ဘာကြောင့်ြ မင့်ရလဲဆိုတော့ အသက်၇၇နှစ်အရွယ် အဘိုးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ရှင်သန်ရေးရုန်းကန်မှုကို ပီပီပြင်ပြင်ပြနိုင်လို့ လိုဆိုပါတယ်…အချစ်တွေ အလွမ်းတွေ အဆွေးတွေ တော့မပါပါဘူး…
Rating 6.1 ရရှိထားတဲ့ Horror ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်…အညွှန်းကိုအနည်းငယ်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ငယ်ရွယ်ပြီးအောင်မြင်တဲ့ Horror ဝတ္တုတွေရေးသားလေ့ရှိတဲ့ ဆာဗန်းနားဟာ မကြာခနအိပ်မက်ဆိုးတွေမက်ပြီး စိတ်ခြောက်ခြားနေရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် တစ်နေ့မှာတော့ နယ်မြို့လေးမှာနေတဲ့ သူ့ဖခင်က သူ့ရဲ့မောင်လေးဖြစ်သူ
လီလန်းဘွဲ့ယူမှာမို့ ပြန်လာခဲ့ဖို့ခေါ်သည့်အတွက် ဆာဗန်းနားဟာ သူ့ချစ်သူဂျက်အပြင် ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့အတူ အပန်းဖြေအနားပါယူမယ်ဆိုပြီး သူ့မွေးရပ်မြေလေးကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်… ဒါပေမယ့်လဲ သူတို့ရဲ့အပန်းဖြေအနားယူမည့် ခရီးစဉ်လေးဟာ ဆာဗန်းနားရဲ့ဆိုးရွာပြီးခြောက်ခြားဖို့ကောင်းတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှ ဘယ်လိုတွေ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ…
Along With the Gods_ The Last 49 Days (2018)
အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အက်ရှင်ဒရာမာဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်….. မြန်မာပရိသတ်သဘောကျခဲ့တဲ့ Along With The Gods ဇာတ်ကားရဲ့ အဆက်အဖြစ် ထွက်ရှိလာတာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာ အဓိကပါဝင်ထားသူတွေကHa Jung Woo, Ju Ji Hoon, Kim Hyang Gi, Ma Dong Seok, Kim Dong Wookစသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မရဏတိုင်းပြည်က အ စောင့်အရှောက်သုံးဦးဖြစ်တဲ့ ဂမ် ရင်း၊ ဟယ်ဝန်မက်နဲ့ လီဒေါ့ချွန်း တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ၄၉ ဦးမြောက် ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ကင်ဆိုဟုန်ကို မြေ အောက်ကမ္ဘာကို လမ်းပြပို့ဆောင် ပေးရမယ့်အကြောင်း တင်ဆက် ထားတာပါ။
ကင်ဆိုဟုန်ဟာ အရင်ဇာတ် ကားထဲက မီးသတ်သမား ဂျာဟုန် ရဲ့ ညီတပ်သားဆိုဟုန်ဖြစ်ပြီးဂမ် ရင်းဦးဆောင်တဲ့ အစောင့်အ ရှောက်သုံးဦးဟာ ဆိုဟုန်ရဲ့ ဝိညာဉ်ကိုလည်းမရဏကမ္ဘာမှာ တရားစီရင်ဖို့အတွက် ပို့ဆောင် ပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ မရဏကမ္ဘာမှာ အ ဆင့်ဆင့်ဖြတ်သန်းရင်း ဆိုဟုန် ဟာ God of House နဲ့ ဆုံခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒီနတ်ဘုရားကလူတွေ ရဲ့ အတိတ်ကို သိနိုင်ပြီးနှစ်ပေါင်း ၁,၀၀၀ ကျော်ကာလအထိကို သိနိုင်တာပါ။လက်ရှိကမ္ဘာ၊ နောက်သွား ရမယ့်
ကမ္ဘာနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ် ကမ္ဘာတွေကို ခရီးနှင်ရင်း မရဏ အစောင့်အရှောက်တွေဟာ သူ တို့တွေရဲ့ အတိတ်ဘဝက လျှို့ ဝှက်ချက်တွေကိုပါ သိရှိခဲ့ပါ တယ်။လူသားတွေအပေါ် ကြင်နာ တတ်တဲ့ အစောင့်အရှောက်သုံးဦး ဟာ ဒီတစ်ခါမှာလည်း ဝိညာဉ် ဆိုဟုန် ငရဲမကျဖို့အတွက် ကူညီ ဖြေရှင်းပေးပြန်ပါတယ်။အရင်ဇာတ်လမ်းနဲ့ ပုံစံခပ် ဆင်ဆင်ဖြစ်နေပေမယ့်လို့ တပ် သားဆိုဟုန်ရဲ့ မရဏတိုင်းပြည် က ၄၉ ရက်တာ စွန့်စားခန်းကို ဘယ်လိုခွဲထွက်ထားသလဲဆိုတာ ကြည့်ဖို့ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်…(ဒီဇာတ်ကားရဲ့အညွှန်းကိုတော့ 7DayDaily မှ ကူးယူတင်ပြပါတယ်…)
mmbusticketဒီတစ်ခေါက်တော့ မင်းသားချောလေး Brenton Thwaites ရဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးနာမည်က An Interview with God (2018)ပါ။ဘာသာရေးဆိုင်ရာကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်နဲ့ အပြန်အလှန် အင်တာဗျူးလုပ်နေသလို ဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးအကျဉ်းကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်မြေပြင်မှာ သတင်းသွားယူနေတဲ့သတင်းတပ်သားလေး ပေါလ်အာရှာ…ဘာသာတရားလိုက်စားသူဖြစ်ပေမယ့် စစ်မြေပြင်ရဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေ ဘုရားသခင်အပေါ်ယုံမှားသံသယဝင်လာပါတော့တယ်။စစ်မြေပြင်ကနေ အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာလဲ အိမ်ထောင်ရေးကအဆင်မပြေဖြစ်နေချိန်မှာ သူ့ဆီကို အင်တာဗျူးတစ်ခုလုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းလာပါတော့တယ်။အဲဒီအင်တာဗျူးမှာ ဘုရားသခင်နဲ့မေးခွန်းထုတ်ကြမှာပါ။လူသား
တိုင်းသိချင်နေတဲ့မေးခွန်းတွေကိုပေါလ်တစ်ယောက်မေးပေမယ့် ဘုရားသခင်ကတော့ပေါလ်ရဲ့ဘဝကိုပဲအခြေခံကာ မေးခွန်းတွေကိုပညာသားပါပါဖြေဆိုပုံတွေကို ဒီကားလေးထဲမှာတွေ့မြင်ရမှာပါ။Imdb 5.4/10 ရရှိထားတဲ့ ဒီကားလေးနာမည်ကတော့ An Interview with God (2018) ပါ။ရှားရှားပါးပါးဘာသာရေးကားလေးကို Channel Myanmarပရိသတ်ကြီးအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Angels & Diamons (2009)
မင်းသားကြီး Tom Hanks အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ဒီထဲမှာ သိဒ္ဓိဆန်းဂိုဏ်းလို့ဘာသာပြန်ထားတဲ့ Illuminati ဂိုဏ်းကိုအကြောင်းပြု ပြီး
ဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားကာ သမိုင်အချက်အလက်တွေစုံလင်စွာထည့်ထားနိုင်လို့
ဇာတ်လမ်းဖန်တီးသူ စာရေးဆရာက Da Vinci Code ကိုရေးသားတဲ့
နာမည်ကြီးစာရေးဆရာ Dan Brown ဖြစ်ပါတယ်။
Angels&Demons နဲ့ Da Vinci Code ကရုပ်ရှင်တစ်ကားစီဖြစ်ပေမယ့် ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။
အခု မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးကတော့ 2017 ခုနှစ်မှာ ထွက်ထားတဲ့ Anna and the Apocalypse ဆိုတဲ့ ဇွန်ဘီ comedy ဇာတ်ကားလေးပါ John Mcphail က ရိုက်ကူးထားပြီး IMDB 6.4 ထိ ရထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ အန်နာဆိုတဲ့ ကောင်မလေးရယ် ဂျွန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးရယ်က အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေပါ ကျောင်းပြီးရင် ဂျွန်က အနုပညာတက္ကသိုလ်တက်မယ် အန်နာကတော့ ခရီးထွက်မယ်ဆိုပြီး ကိုယ်စီ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်လေးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာမြို့လေးမှာ နေထိုင်ကြပါတယ် တစ်နှစ်တော့ ခရစ်စမတ်ချိန်မှာတော့ ခါတိုင်းနှစ်နဲ့ မတူဘဲ ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်
အဲဒါကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးကြောင့် မြို့ထဲက လူတွေဟာ ဇွန်ဘီတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီး သူတို့ကို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရတာပါ သူတို့သူငယ်ချင်းတွေဟာ မိသားစုတွေနဲ့ တကွဲတပြားဖြစ်နေကြပြီး သူတို့ချစ်ရတဲ့ မိဘတွေ မိသားစုတွေရှိတဲ့ဆီကို ရောက်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်တွေကိုယ်စီနဲ့ ဇွန်ဘီတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတာလေးတွေကို ရိုက်ပြထားတာပါ ဒီဇာတ်ကားမှာ ထူးခြားတာကတော့ ဒိုင်ယာလော့တွေထဲမှာ သီချင်းလေးတွေ ညှပ်ပြီး သီဆိုပြထားတာပါ တစ်ကားလုံးလိုလိုမှာ ပျော်စရာ
ဇာတ်ဝင်သီချင်းလေးတွေနဲ့ လူငယ်ဆန်ဆန် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇွန်ဘီကားကောင်းလေးပါ စိတ်လှုပ်ရှားရသလို မိသားစုစိတ်ဓာတ် သူငယ်ချင်းတွေကြားက မေတ္တာတရားတွေကို ပေါ်လွင်အောင် ရိုက်ကူးပြထားတာမို့ လက်မလွတ်တမ်း ကြည့်သင့်တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဇာတ်ကားလေးပါ နောက်ဆုံးမှာ အန်နာတို့ သူငယ်ချင်းတွေ သူတို့ချစ်ရတဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ ပြန်ုဆုံကြရလား မတွေ့ခင်မှာရော ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကို ကြုံရလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားရင်း စောင့်ကြည့်ကြပါလို့
Antichrist ဆိုတာ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာထွက်ရှိထားတဲ့ horror ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်သားလေးတစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်သားလေးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ ကြေကွဲခံစားနေရတဲ့ဇနီးသည်ရဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးသောကတွေကိုယောကျာ်းဖြစ်သူကကုစားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကုထုံးနည်းလမ်းနဲ့ပဲ ကုသပေးဖို့စီစဉ်လိုက်ပါတယ်မိန်းမဖြစ်သူရဲ့စိတ်အတွင်းကအကြောက်ရွံ့ဆုံးနေရာကိုသွားနေထိုင်ရင်းနဲ့
ဒီကုထုံးကိုစတင်မှာဖြစ်တာကြောင့် သစ်တောထဲကသစ်လုံးအိမ်လေးကိုသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီသစ်လုံးအိမ်လေးမှာ သားလေးဖြစ်သူနစ်ခ်နဲ့ သူ့မိန်းမတို့သွားရောက်ဖူးခဲ့တဲ့နေရာလေးပါသူတို့သွားရောက်နေထိုင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကတကယ့်ကိုငရဲတစ်ခုအလားမြင်ယောင်လာမိပါတော့တယ်ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ပုံစံတွေ အနေအထားတွေကိုမြင်တွေ့ခံစားနေခဲ့ရပေမယ့်သူ့မိန်းမအတွက်ကြိုးစားပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တမ်း သူကိုယ်တိုင် သူ့မိန်းမရဲ့
စာတမ်းတွေကိုတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့ပဲရင်ခုန်လိုက်ရအောင်ပါတကယ်တော့ ဒီကားကတော်တော်လေးကိုအာရုံစားတဲ့ကားပါအတွေးပိုင်းကိုလုံးဝအကျယ်ချဲ့ပြီးတော့ စဉ်းစားစေတဲ့ဇာတ်ကားလိုပုံစံမျိုးမလို့ ကြည့်ရတာ စိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းလှပါတယ်
သရဲကား တွေ တော်တော်များများ ကြည့်ဖူးပါတယ် အကောင်လိုက်ပြတောင်ကြောက်ဖို့ မကောင်းတာတွေ ကြုံဖူးတယ် ဒါပေမယ့်ဒီ Apartment 1303 ဆိုတဲ့ Japan Horror Movie ကတော့သင့်စိတ်ကို အကောင်းဆုံး ချောက်လှန့်မှု အပေးနိုင်ဆုံး ရုပ်ရှင်ကားလို့ ညွှန်းဆိုချင်ပါတယ်တစ်ယောက်ထဲ တိုက်ခန်းတစ်ခုထဲ နေတက်တဲ့သူတွေ
တိုက်တွေရဲ့ အပေါ်ဆုံး ထပ်မှာ နေတဲ့ သူတွေ နဲ့ ကိုယ်နေတဲ့ တိုက်ခန်းမှာ ခြေရာလက်ရာ ပျက်ယွင်းနတာကြုံရတဲ့ သူတွေ အတွက် ဒီရုပ်ရှင်ကားက ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ် အတိနဲ့ပါပဲ…ဒီဇတ်လမ်းထဲမှာတော့ ပင်လယ်နဲ့ နီးပြီး ဈေးအရမ်းတန်တဲ့ တိုက်ခန်း ကို ငှားနေကြသူတွေဝယ်ကြသူတွေဟာ အမြဲတမ်း အဲ့ဒီတိုက်ပေါ်ကနေ ခုန်ချပြီး သက်သေသွားတက်ကြပါတယ်ဘယ်လောက်ပဲ မယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ ဘယ်လောက် သတ္တိကောင်းတဲ့သူဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီ တိုက်ခန်းမှာ မနေ
ရဲလောက်အေအာင် ဆိုးဝါးလွန်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေ ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ကြည့်သူတွေလဲ ညဘက်မှာ စောင်လေးခြုံပြီး မီးတွေ အကုန်မှိတ် တိတ်တိတ်လေးဒီရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ကြရအောင်…ကဲ.. သေချာပြီ ဆိုရင် အလွှာ ၁၃ ဓါတ်လှေကားနံပါတ် ၁၃ အခန်းနံပါတ် ၁၃၀၃ ကို ခဏလောက်အလည်သွားရအောင် သင် တစ်ယောက် ထဲ မသွားရဲဘူးဆိုရင် သင့် သူငယ်ချင်း တစ်ချို့ပါအခုပဲ Mention ခေါ်ပြီး အတူသွားဖို့ ပြင်လိုက်ကြရအောင်… 😀 ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ဘာသာပြန်ပေး
ထားသူကတော့ Thin Zar Htet ဖြစ်ပြီးThit San Khant မှ Encode ၍ တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်… ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ အတော်ကြာပြီ ဖြစ်ပြီး၍ Quality မှာ အနည်းငယ်မှုန်ဝါးနေပါသဖြင့်သည်းခံကြည့်ရှုပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ဒီစူပါဟီးရိုး ရုပ်ရှင်ဟာ DCEU ရဲ့ ၆ ကားမြောက်ရုပ်ရှင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ရှေ့မှာတော့ Man of Steel, Batman vs Superman, Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League တို့ ထွက်ရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း
============ အတ္တလန်တစ်နိုင်ငံရဲ့ မင်းသမီးဟာ ကုန်းမြေပေါ်က မီးပြတိုက်စောင့်တစ်ယောက်နဲ့ ချစ်မိပြီး အာသာ(အကွာမန်းကို) မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူကြီးပြင်းလာချိန်မှာ အတ္တလန်တစ်ရဲ့ ဘုရင် အွန်းမ်ဟာ နိုင်ငံ ၇ ခု ကို စုစည်းပြီး ကုန်းမြေကမ္ဘာကို စစ်တိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်လာပါတယ်။ ဒီစစ်ပွဲကိုတားဖို့ အတွက် အာသာဟာ သူ့ရဲ့ဆရာ ဗော်ကို၊ မင်းသမီး မယ်ရာ တို့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ စွမ်းအားအကြီးဆုံး သုံးခွခရင်း ထရိင်းဒန့်ကို ရှာပြီး အတ္တလန်တစ်ရဲ့ ထီးနန်းကို ရယူဖို့ ကြိုးစားရပါတော့တယ်………
Architecture 101 ဇာတ်ကားဟာဆိုရင်တော့
ကိုရီးယား Drama , Romance ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး
Director: Yong-Joo Lee က ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ှ >IMDb Rating – 7.2/10
>Asianwiki Rating – 90%
မင်းသား Je-hoon Lee တို့အပြင်
Korean Kpop အဖွဲ့တွေထဲကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့
Miss A အဖွဲ့ထဲက ကောင်လေးတွေရဲ့အသည်းစွဲ
Suzy Bae လေး တို့က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ကိုရီးယားဆိုးလ်မြို့မှာနေတဲ့
ဂျယ်ဂျူကျွန်းက အိမ်လေးကို ပြင်ဖို့အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီသို့ သွားရာမှ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇နှစ်လောက်က သူနဲ့အတူ
ကိုရီးယားဆန်ဆန် Ro ရတဲ့အပြင် ကြေကွဲစရာ လွမ်းဆွတ်မှုအရသာပါ
ခံစားရမည်ဖြစ်တာကြောင့် ကြည့်ရှု့သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
CM Fan တွေ အတွက် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့မတင်ဖြစ်တာ ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ ဆိုက်ကို လူသတ်သမား ရုပ်ရှင်ကားလေးပါဇတ်လမ်းပုံစံကတော့ ခေတ်မှီတိုးတက်လာတဲ့ လူနေမှု စနစ် မှာ
သိသိသာသာ ဂျင်းထည့်နေတဲ့ အိမ်ခြံမြေ ပွဲစားတွေ အကြောင်းပါတိုးချဲ့ မြို့သစ် တစ်ခုမှာ အိမ်ဈေးတွေ တက်လာမယ် ခြံဈေးတွေတက်လာမယ်ဆိုပြီး ဂျင်းလိုက်ထည့်နေတဲ့ ကတ်ဆီ ဆိုတဲ့အိမ်ပွဲစားမလေး ရှိပြီး သူကိုယ်တိုင်ကလဲ အိမ်ပွဲစားမဖြစ်ခင်အိမ်ပွဲစား လူလည်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ သူ့သူဌေးဆီက ဂျင်းမိပြီးမဖြစ်ထွန်းတဲ့ ခေါင်တဲ့ မြို့မှာ အိမ်ဝယ်မိသူ တစ်ယောက်ပါလောလောဆယ် လတ်တလော အကျွေးတွေ ပိပြီး သမီးတစ်ယောက်ရှိတဲ့အိမ်ထောင်ကွဲ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်
ပေါ့…. Phone အားကုန်နေပြီလား XP Power Bank ရှိတယ်… သူ ဂျင်းထည့်ခံရသလို သူများကိုလဲ ဂျင်းလိုက်ထည့်တဲ့ ပညာကိုကတ်ဆီ တစ်ယောက် ရရှိသွားပြီး သူ့သူဌေး နဲ့ ပေါင်းကာပိုက်ဆံရှိသူတွေကို မက်လုံးပေး ခေါင်တဲ့နေရာက အိမ်ခြံမြေတွေကိုမတန်တဆ ဈေးတွေနဲ့ ရောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်…တစ်ရက်မှာတော့ သူတို့ ဂျင်းထည့်ခဲ့တဲ့ Customer တစ်ဦး ဖြစ်သူမော်ရမ် မှ ကတ်ဆီ ရဲ့ သူဌေး ကို သတ်ဖြတ်ပြီး ကတ်ဆီကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့ပါတော့တယ် ရဲရော ဘယ်အဖွဲ့
အစည်းကိုမှဆက်သွယ်မရအောင် ခေါင်တဲ့ ဒီတိုးချဲ့မြို့သစ်ကနေသူမ ဘယ်လိုလွတ်မြောက်နိုင်မလဲဆိုတာသည်းထိတ်ရင်ဖို ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ….ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးထားတာကတော့May Thu ဖြစ်ပြီး Thit San Khant မှတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်
ဒီနေ့တော့ CM ပရိတ်သတ်တွေအတွက်IMDb Rate မှာ 6.4 ရရှိထားတဲ့ Astro Boy လို့ခေါ်တဲ့Animation ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်…ဘယ်လိုသဘောမျိုးနဲ့နေနေကြည့်သင့်တဲ့ Animation ကားကောင်းလေးဖြစ်ကြောင်းတော့အသိပေးပါရစေ
Dr. Tenma ဆိုတာ Toby ကို သိပ်ချစ်တဲ့ ဖခင်ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်သလိုRobot တည်ထွင် ရာမှာလဲ နာမည်ကြီးတဲ့ သိပ္ပံ ပညာ ရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။Dr. Tenma ရဲ့ သားပီပီ သိပ္ပံပညာ တွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ Toby ဟာDr. Tenma ရဲ့ ခွင့်ပြုချက် မပါပဲ နည်းပညာသစ် Red Core နဲ့ Blue Core တို့စမ်းသပ်တဲ့ ပြပွဲကို ခိုးပြီး သွားရောက် ခဲ့ပါတယ်။ Red Core ထဲ့သွင်း စမ်းသပ်တဲ့ စက်ရုပ်ဟာထိန်းချုပ်မှု လွတ်ထွက်သွားပြီး ပုံကန်တဲ့ အချိန်မှာ မ
ထင်မှတ်ပဲ Toby တစ်ယောက် ပိတ်မိပြီးRed Core ထဲ့သွင်း ထားတဲ့ စက်ရုပ် ရဲ့ လက်နက် စမ်းကြောင့် သေဆုံးသွား ခဲ့ပါတယ်။သားကို သိပ်ချစ်တဲ့ အဖေ Dr. Tenma တစ်ယောက် ရူးသွပ် မတတ် ခံစား ရပြီး Toby နဲ့ တူတဲ့ စက်ရုပ် တစ်ရုပ်ကို တည်ဆောက်ပြီး Toby ရဲ့ DNA က တဆင့် မှတ်ဉာဏ်တွေ ထဲ့သွင်း ပေးခဲ့ပါတယ်။လူသား တစ်ယောက် ကဲ့သို အသိဉာဏ်တွေ ရှိဖိုနဲ့ ပိုမို အစွမ်း ထပ်စေဖို့ကျန်ရှိနေတဲ့ Blue Core ကို Toby နဲ့ တူတဲ့ စက်ရုပ် Astro Boy ထဲမှာ
ထည့်သွင်း အသုံးပြု ခဲ့ပါတယ်။စစချင်းမှာ သားရဲ့ နေရာအကို အစားထိုး နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့် ထားပေမယ့် အသိစိတ်က သားအရင်း မဟုတ်ပဲစက်ရုပ် တစ်ရုပ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အသိပေး နေတော့ သားအရင်း တစ်ယောက်လို ချစ်လို့ မရခဲ့ပါဘူး။ထို့အတူ Toby ရဲ့ အသိဉာဏ်တွေ ရောက်နေတဲ့ Astro Boy ဟာလဲသူ့ကိုယ့်သူ Toby လို့ပဲ ထင်မှတ်ပြီး ဖခင်ရဲ့ မေတ္တာ ငတ်နေသလို ခံစား ခဲ့ရပါတယ်။မထင်မှတ်ပဲ Red Core အသုံးပြုခဲ့တဲ့ စက်ရုပ်ကို အသက်သွင်းချင်း ခံရ
တော့Dr. Tenma တို့ရဲ့ မြို့ဖြစ်တဲ့ Metro City မှာRed Core စက်ရုပ်ရဲ့ ဖြတ်စီးမှုတွေကို တားစီး နိုင်မယ့်လူမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာ Blue Core ထည့်သွင်းပြီးတည်ထွင်ထားတဲ့ Astro Boy ဟာ သူ့ကိုယ်သူ စက်ရုပ်လို့ သိသွား ပြီးရန်သူတော် Red Core ကို ဘယ်လို နှိပ်နင်းမလဲ ဆိုတာ…..
ဒါရိုက်တာ David Bowers ရဲ့ 94 မိနစ် ရှည်တဲ့ Animated Comedy ဇာတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။အသံ သရုပ်ဆောင်တွေ အဖြစ် Dr. Tenma (voice of Nicolas Cage),Toby & Astro Boy (voice of Freddie Highmore) တို့က အဓိက ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ထားပါတယ်။ရုပ်ရှင်အညွှန်းကိုတော့ moviereview ygn မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်
ATM_ Er Rak Error (2012)
မင်းသား Chantavit Dhanasevi နှင့် I Fine..Thank You..Love You မင်းသမီးချော Preechaya Pongthananikorn တို့
အဓိက ပါဝင်ထားကြပြီး အခြားဟာသသရုပ်ဆောင်များစွာနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့
Comedy, Romance အမျိုးအစား နာမည်ကြီးထိုင်းဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပြီး ဟာသရသမြောက်အောင် စိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့ပုံဖော်ထားပါတယ်။
IMDb Rating (7.2/10) အထိရရှိထားပြီး ထိုင်းဇာတ်ကားတွေလဲ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ဈေးကွက်ကို
မိသားစုနဲ့ အနားယူရင်း အပန်းဖြေ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ဟာသဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။
(မြန်မာစာတန်းထိုးကိုတော့ ကိုမိုးစက် မှ ကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာပါ။
pk (2014) မြန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားကို ကြည့်ဖူးသူတွေကတော့ “မိုးစက် ရမ်းသမ်းဘာသာပြန်သည်။” ဆိုတာကိုရင်းနှီးနေကြမှာပါ။ ရှုစားအားပေးကြပါဦး။)ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ (V-Day နေ့)ဟာဆိုရင် ဇာတ်ကားထဲက အဓိကမင်းသမီးလေး
Preechaya Pongthananikorn ရဲ့ မွေးနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်…
အဆင်ပြေရင် “Happy Birthday ပါ….Ice” ဆိုပြီးမန့်သွားပေးကြပါ ..
သူ့ရဲ့ Nickname က Ice Preechaya ဖြစ်ပါတယ်။
James Mcavoy ,Keira Knightley, Lady Bird (ဝါ) Saoirse Ronan နဲ့ Benedict Cumberbatch တို့လို နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေ အစုံအလင်နဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားပါ။အဆုံးသတ် မတိုင်ခင် အထိတော့ ဒီ ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်လုံးက သိပ်မထူးခြားသလိုပါပဲ။ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ ထူးခြားချက်ကို ကျွန်တော် ချရေးခဲ့ရင်လည်း spoil ပြီးသား ဖြစ်သွားပါမယ်။အချိန်ကာလအားဖြင့် Dunkrik မဖြစ်မှီ….. အထက်တန်းလွှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့
အိမ်ဖော်တစ်ယောက်ရဲ့သား…..ချစ်ကြိုက်မိခဲ့ကြတယ်…။ မှားယွင်းသွားတဲ့ စာတစ်စောင်က မထင်မှတ်ပဲ ယူလာခဲ့တဲ့ ဂြိုလ်ဆိုးတွေကြားမှာ..သူတို့ ဝေးသွားခဲ့ကြတယ်…။
စစ်တပ်ထဲ ရောက်နေတဲ့ ကောင်ကလေးနဲ့… အိမ်ကနေ ပြေးထွက်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး.. စစ်မထွက်မှီမှာ ပြန်တွေ့ကြတဲ့အချိန်… နေသာ လေလာမဲ့ တစ်နေ့တော့ကို သူတို့ ပြန် ယုံကြည်မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်…။ စစ်ရဲ့ အနိဋ္ဌာရုံတွေကြားကနေ ဒဏ်ရာအထပ်ထပ်နဲ့ မျှော်လင့်နေတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်နဲ့ အချစ်အတွက် အရာရာကို ကျောခိုင်းခဲ့တဲ့ လူကုံထံ မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ယုံကြည်..မျှော်လင့်ခြင်းတွေ…. သူတို့ အတူနေချင်ခဲ့ကြတဲ့ ကမ်းခြေ ဘေးက အိမ်ကလေးတစ်လုံးမှာ
ပြန်ဆုံတွေ့ကြမဲ့ တစ်နေ့နေ့.. အဆုံးသတ်မှာ ဘာတွေများ ဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ စီးမျောကြည့်ကြပါ။အော်စကာ Nomi အတော်ဝင်ထားပြီး Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Score ဆုလည်းရထားတဲ့အပြင် တခြားက ဆုတွေလည်း အတော်ရထားတဲ့ ကားပါ။ Genreကတာ့ Romance and Drama ပါ။
ဒီ ဇာတ်ကားလေး ကတော့ 6.6 Rating ရထားပြီးအင်္ဂလန်မြို့ကြီးသူ ဆာယာရဲ့သူ့ခင်ပွန်းဦးစီးနေတဲ့ ဩစတြေးလျတိုက် ဒါဝင်မြို့လေးက နွားမွေးမြူရေးခြံကိုလိုက်သွားရာကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ အစပိုင်းမှာတော့မြို့ကြီးသူဟန်ကျော့ကျော့မာ့မော့နေခဲ့ပေမယ့် ယောကျ်ားဖြစ်သူမတရားအသတ်ခံရပြီးနောက်မှာတော့ မိန်းမသားတန်မဲ့သတ္တိရှိရှိ ဩစတြေးလျလွင်ပြင်တွေကိုဖြတ်ပြီးနွား၁၅၀၀ အုပ်ကိုမောင်းရင်းဒါဝင်မြို့ကိုအရောက်ပို့ပုံတွေ၊ အဲဒီတုန်းကလူမည်းစပ်ကလေးတွေဆို မစ်ရှင်ကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းကိုပို့ပြီး လူဖြူတွေကိုအလုပ်အကျွေးပြုတတ်ဖို့သင်ကြားပေးတဲ့ခေတ်မို့ ဆာယာဟာ ဒေသခံချစ်စရာကလေးတစ်ယောက်ကိုသံယောဇဉ်တွယ်မိပြီး မွေးစားဖို့ကြိုးစားပုံတွေ တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ဆောင်မင်းသားအနေနဲ့ ဆာယာ့ကိုကူညီရင်းသံယောဇဉ်တွယ်မိသွားတဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်တဲ့ကောင်းဘွိ ုင်တစ်ယောက်အဖြစ် Woverineမင်းသား Huge Jackman ကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ Nicole Kidman သရုပ်ဆောင်တဲ့ဆာယာဇာတ်ရုပ်ဟာလည်းကိုယ်အရမ်းကြိုက်မိတဲ့ဇာတ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့အပြင် ဇာတ်လမ်းလေးကလည်းအရမ်းကောင်းတာကြောင့် ဒီဇာတ်ကားလေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲကြည့်သင့်ပါကြောင်းသတင်းပေးလိုပါတယ်….
Avicii_ True Stores (2017)
EDM ကို ပေါ်ပင်ဂီတ၊ အပေါစားဂီတတစ်ခုလို့မြင်နေကြတဲ့ မြန်မာဂီတချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ပကာသနအကင်းဆုံးနဲ့ ဘဝကိုအရိုးရှင်းဆုံးဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး
စောစီးစွာကြွေလွင့်သွားခဲ့ရတဲ့ ကမ္ဘာကျော် DJ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Avicii အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ Avicii: True Stories ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။စတော့ဟုမ်းမြို့က ချာတိတ်လေးတစ်ယောက်ဟာ အသက်
၁၇ နှစ်အရွယ်မှာ FL Studios ဆိုတဲ့ Software လေးတစ်ခုကနေ အစပြုပြီး House Music နဲ့ Dance Music လောကမှာ
အအောင်မြင်ဆုံးလူငယ်တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ သူဖန်တီးခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေဟာ မိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားပြီး လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲကို Levels, Wake Me Up, The Nights
စတဲ့ သီချင်းတွေကို အရောက်ပို့ပေးခဲ့သူပါ။ နာမည်ကျော် DJ သမားတွေဖြစ်တဲ့ Laidback Luke, David Guetta လိုလူမျိုးတွေကပါ သူ့ကို ပါရမီရှိပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ DJ သမားလို့ ချီးကျူးခဲ့ရတဲ့အထိ
သူ့ရဲ့ ဂုဏ်သတင်းက ကျော်ကြားခဲ့သလို အနုပညာသက်တမ်း ၇ နှစ်လောက်အတွင်းမှာ ပွဲပေါင်း ၈၀၀ ကျော်ဖျော်ဖြေခဲ့သူလဲဖြစ်ပါတယ်။Avicii ရဲ့ဘဝဟာ ပရိသတ်တော်တော်များများအတွက်တော့ အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ
လိုအောင်မြင်မှုတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ Avicii ဟာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးတွေနဲ့
ရုန်းကန်နေရတာကိုတော့ သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူနည်းစုကသာ သိရှိခဲ့တာပါ။ လူငယ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် ပွဲပေါင်းများစွာကို မမောမပန်းပဲဖျော်ဖြေနိုင်ဖို့၊ အလုပ်ကို အာရုံသေချာစိုက်နိုင်ဖို့အတွက်
အရက်သေစာကို ကုထုံးတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Avicii ဟာ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ် ပန်ကရိယရောင်ရမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဝေဒနာကြောင့် ရှိုးပွဲတွေလဲ ဖျက်ခဲ့ရတဲ့အပြင် အလုပ်တွေပါလစ်ဟင်းလာတဲ့အတွက် စိတ်ဓာတ်တွေကျခဲ့သလို အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးဒဏ်တွေကြောင့် ပြန်လည်သက်သာဖို့ အတော်လေးအချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူဟာ ဆေးရုံတစ်ခါဆင်းတိုင်း အနားယူဖို့ထက် ပရိသတ်အတွက် သီချင်းအသစ်တွေဖန်တီးဖို့၊ ဖျော်ဖြေပွဲတွေလုပ်ဖို့သာ တာဆူခဲ့ပြီး ဒီဒဏ်တွေက သူ့ကိုတဖြေးဖြေးနှိပ်စက်လာတာကို လျစ်လျူရှှုနေခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်မှာဆိုရင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်က သူ အနားယူပြီလို့ တရားဝင်မကြေငြာခင် နောက်ဆုံးဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ပွဲအထိ မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဘ၀ အတက်အကျတွေ သီချင်းဖန်တီးမှုတွေအကုန်ပါဝင်ပြီး
Avicii ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ သိလာစေရမယ်လို့ အာမခံရဲတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ကားပါ။
အခုဆိုရင်တော့ အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲ Avicii ကတော့ အကြွေစောတဲ့ပန်းကောင်းတစ်ပွင့်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ သူ့ရဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေ၊ ဝေဒနာတွေကို မခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး
တရားဝင်ကြေငြာချက်လဲထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ သူ ကွယ်လွန်သွားပေမယ့် သူ့ရဲ့ Levels နဲ့ Wake Me Up ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့နှုတ်ဖျားမှာ စွဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ EDM သမားတွေဆို အမြင်စောင်းတတ်တဲ့၊
အထင်သေးတတ်တဲ့လူတွေအတွက်လဲ ဒီကားကိုကြည့်ပြီးရင် သူတို့ရဲ့ဘဝကို နားလည်လာမှာသေချာပါတယ်။ဒီလိုအနုပညာရှင်ကောင်းတွေ ဆက်ပြီးပေါ်ထွက်လာဖို့မျှော်လင့်ရင်း ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ Avicii လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ဆွီဒင်စကားပြောတစ်ချို့ဟာ English စာဖိုင်မှာမပါဝင်တဲ့အတွက် ချန်ထားခဲ့ရပါကြောင်းအသိပေးလိုပါတယ် (ဘာသာပြန်သူကတော့ ကိုအာကာနဲ့ ကမျိုးသန့်တို့ပါ)
အသက်အလတ်ပိုင်းအရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်တစ်ယောက် အိမ်နဲ့အဆင်မပြောဖြစ်ပြီး အိမ်ကနေထွက်လာခဲ့ပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်ခဲ့တယ် ထိုလူအရွယ်ရောက် အိမ်ထောင်ရပ်သားကျပြီး မိသားစု ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နေချိန်မှာ
ညီဖြစ်သူဆီက ဖုန်းလာပြီး အမေဖြစ်သူပျောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို ကြားလိုက်ရတော့ အမေရှိတဲ့မြို့ဆီသွားပြီး အမေဖြစ်သူကို ရှာပါတော့တယ် အမေဖြစ်သူကိုရှာဖွေရင်း ထူးဆန်းတာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါတော့တယ် သူတို့ရဲ့အမေဖြစ်သူကို ရှာတွေနိုင်ပါ့မလား အဖြစ်ဆိုးတွေကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာကတော့….
ဘုရင့် သက်တော်စောင့် ကက်တာပါးက မဟစ်ရှ်မာတီ နိုင်ငံတော်က ထီးညွန့်နန်းလျာ အမန်ဒရာဘာဟုဘာလီကို သူ ကိုယ်တိုင် ဘာကြောင့်သတ်ဖြတ် ပစ်ရတဲ့အကြောင်းကို သားဖြစ်သူ မဟင်ဒရာဘာဟုဘာလီကို ရှင်းပြတဲ့ပုံစံနဲ့ ဇာတ်လမ်းဆက်ထား တာပါ။ဆူပူသောင်းကျန်းတဲ့ မ ကောင်းဆိုးဝါးတွေ နှိမ်နင်းအပြီး မှာတော့ ဘုရင်မကြီးဆီဗာဂါမိ ဟာ သားဖြစ်တဲ့ အမန်ဒရာဘာဟု ဘာလီကို ထီးနန်းဆက်ခံမယ့်သူ အဖြစ် ကြေညာခဲ့ပြီး တူဖြစ်တဲ့ ဘာလာကိုတော့ စစ်သူကြီးအဖြစ်
ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဘုရင်မကြီး က အမန်ဒရာကို တပ်မှူးကက် တာပါးနဲ့အတူ အနီးဝန်းကျင်က နိုင်ငံတွေနဲ့ ပြည်သူတွေကြားကို လေ့လာဖို့ စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုသွားရင်းနဲ့ တစ်နေ ရာအရောက်မှာတော့ တိုက်ရေး ခိုက်ရေးကျွမ်းကျင်ပြီး ထက်မြက် တဲ့ ကန်တာလာနိုင်ငံက မင်းသမီး ဒီဗာဆီနာနဲ့ဆုံခဲ့ပြီး မင်းသမီးကို သဘောကျမိတဲ့အတွက် အမန် ဒရာဟာ သာမန်လူတစ်ဦးပုံစံနဲ့ ချဉ်းကပ်ကာ မင်းသမီးရဲ့နိုင်ငံကို ကက်တာပါးနဲ့အတူ လိုက်သွားခဲ့ ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း ဘုရင်မ ကြီး ဆီဗာဂါမိဟာ ရန်သူနိုင်ငံက မင်းသမီး ဒီဗာဆီနာနဲ့ တူတော် ဘာလာကို နှစ်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် လက်ဆက်ဖို့ ကမ်းလှမ်း စာပို့ခဲ့ပါတယ်။ မင်းသမီးက ငြင်း ဆန်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘုရင်မကြီး အမျက်ထွက်ပြီး ကန်တာလာကို တိုက်ခိုက်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့ပါတော့ တယ်။ မင်းသမီး ဒီဗာဆီနာတို့ နိုင်ငံကို ရန်သူတွေကျူးကျော်ဝင် လာတဲ့အခါမှာ အမန်ဒရာက ကူညီတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ အံ့မခန်းစွမ်းအားတွေကြောင့် မင်းသမီးရော၊ ဟန်တာလာဘုရင်ကြီး
ရော အံ့အားသင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ထူးခြားအစွမ်းတွေကြောင့် သာမန်လူ မဟုတ်တန်ရာတဲ့အ တွက် မေးမြန်းရင်း ဘုရင်မကြီးရဲ့ သားတော်ဆိုတာ သိသွားခဲ့ကြပြီး အမန်ဒရာက မင်းသမီးကို သ ဘောကျကြောင်း ဖွင့်ပြောခဲ့သလို ဘုရင်မကြီးကလည်း လက်ထပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းထားတာလည်း ရှိတဲ့အ တွက် မင်းသမီးကို တစ်ပါတည်း ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟိုဘက်နိုင်ငံရောက်တဲ့အ ခါမှာ မင်းသမီးဒီဗာဆီနာကို ဘာ လာနဲ့ပေးစားဖို့ ကမ်းလှမ်းတာဖြစ် နေတဲ့အတွက် ဘုရင်မကြီး၊ အမန်ဒရာနဲ့
မင်းသမီးတို့ အချေအတင် တွေဖြစ်ကာ အမန်ဒရာက သူ့ မယ်တော်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး သူ့ လမ်းသူလျှောက်ခဲ့တဲ့အတွက် ရာထူးအသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဘာလာက ရှင်ဘုရင်ဖြစ် သွားခဲ့ပေမယ့် လူထုကတော့ စစ်သူကြီးဖြစ်သွားတဲ့ အမန်ဒရာဘက်ကသာ ရပ်တည်ပြီး ထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ အမန်ဒရာအပေါ် မရှုဆိတ်တဲ့ဘာလာဟာအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေပေးခဲ့သလို ပြဿနာတွေဖြေရှင်းမှုမှာ လည်း ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီး အသက်အန္တရာယ်အထိပါ ဒုက္ခပေးဖို့လုပ်ခဲ့ပါတော့
တယ်။ပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည်တဲ့ အမန်ဒရာနဲ့ မဟုတ်မခံမင်းသမီး ဒီဗာဆီနာတို့ ဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေ ရင်ဆိုင် ရမှာလဲ၊ ဘုရင်မကြီးနဲ့ ဘာလာက တစ်ဖက်၊ အမန်ဒရာတို့ က တစ်ဖက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမှာလဲ၊ အမန်ဒရာရဲ့ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုသိသွားတဲ့ သားဖြစ်သူ မဟင်ဒရာဘာဟုဘာလီတစ်ယောက် ဘယ်လိုလက်တုံ့ပြန် မှာလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ဦးနော်။ဒီဇာတ်ကားမှာ အမန်ဒရာ ဘာဟုဘာလီ၊ မဟင်ဒရာ ဘာဟု ဘာလီအဖြစ် ပရာဘက်စ်၊
ဘာလာအဖြစ် ရာနာ ဒက်ဂူဘာတီ၊ ဒီဗာဆီနာအဖြစ် အနွတ်ရှ်ကာ ရှက်တီ၊ ဘုရင်မကြီး ဆီဗာဂါမိ အဖြစ် ရမ်ရာခရစ်ရှ်နာ၊ ကက်တာပါးအဖြစ် ဆက်သ်ရာရာ့ဂျ်တို့ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
(ရုပ်ရှင်အညွှန်းကိုတော့ 7Daydaily မှကူးယူဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီး ဘာသာပြန်ကတော့
IMDb Rating (8.8/10) ထိရရှိထားတဲ့ Action, Adventure, History အမျိုးအစား Bollywood ရာဇဝင်ဇာတ်ကားပါ။ရှေးခေတ်အိန္ဒိယတိုင်းပြည် က အင်အားကြီးဘုရင်တွေနဲ့ ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ဖော်ကျူးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ရှီဗာဆိုတဲ့ မွေး ကင်းစကလေးငယ်လေးနဲ့ သူ့ရဲ့ အထိန်းတော်ဖြစ်သူတို့ကို ဘုရင့် မှူးမတ်တွေက လိုက်ပြီးတော့ သုတ်သင်ပါတယ်။ ထွက်ပြေးရင်း လမ်းခုလတ်အရောက်မှာ သူ့ရဲ့ အထိန်းတော်ဖြစ်သူက ကွယ်လွန်
သွားခဲ့ပြီး ရှီဗာဆိုတဲ့ ကလေးလေးကို ဒေသခံရွာသားတွေက စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ရှီဗာ တဖြည်းဖြည်းကြီးလာ တဲ့အခါ တခြားလူငယ်တွေနဲ့မတူ ဘဲ သန်မာပြီးရဲရင့်တဲ့လူငယ်တစ် ယောက်ဖြစ်လာတယ်။ သူကြီး ပြင်းခဲ့တဲ့ရွာနဲ့ မနီးမဝေး တောင် ပေါ်မှာ ရှေးဟောင်းဘုရင့် တိုင်း ပြည်တစ်ခုရှိပြီး အဲဒီတိုင်းပြည်မှာ အကျဉ်းကျနေတဲ့ ဘုရင်မတစ် ပါးရှိတယ်။ တစ်ရက်မှာ ရှီဗာက တောင်ပေါ်တက်ဖို့ ကြိုးစားရင်း အရမ်းလှတဲ့ အမျိုးသမီး တစ် ယောက်ကို တွေ့ခဲ့တယ်။ ဒီအမျိုး သမီးနောက်ကို
လိုက်ဖို့ကြိုးစား ရင်းနဲ့ပဲ တောင်ပေါ်အထိ ရောက် ခဲ့ပြီး တောင်ပေါ်မှာ မျိုးနွယ်စုတစ် စုကို တွေ့ရတယ်။အဲဒီမျိုးနွယ်စုက ဘုရင့်တိုင်း ပြည်က အကျဉ်းကျနေတဲ့ ဘုရင် မကို ကယ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာဖြစ် တယ်။ တိုတိုပြောရရင် ရှီဗာက သူကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးကို ကူ ညီဖို့ကြိုးစားရင်း အကျဉ်းကျနေ တဲ့ ဘုရင်မကို ကယ်ဖို့ဖြစ်လာ တယ်။ အဲဒီဘုရင်မက တကယ် တော့ ရှီဗာရဲ့ မိခင်အရင်းဖြစ်ပါ တယ်။ ဇာတ်ကားက တော်တော် ပေရှည်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ဒီတိုင်းပြည်ကြီးမှာ ရှီဗာမ
သိတဲ့ ဇာတ်ကြောင်းတွေ ကျန်ပါတယ်။ သူ့အဖေ၊ အမေ၊ တိုင်းပြည်ကြီး အကြောင်း၊ စစ်ပွဲတွေအကြောင်း တွေ အများကြီးပါ။ နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းတွေနဲ့ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဆက်ကိုတော့ ၂၀၁၆ မှာရုံတင်မယ်လို့လဲ ကြေငြာထားပါတယ်။(ရုပ်ရှင်အညွှန်းကို 7Daydaily မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
Baazaar ဆိုတာ အိန္ဒိယအခေါ်အရ ဈေး ၊ ဈေးကွက်ပေါ့…. ဟုတ်ပါတယ် ဈေးဆိုတဲ့အတိုင်း ရောင်းသူရှိမယ် ဝယ်သူရှိမယ် ဈေးအပြိုင်တင်တာ ချတာတွေ အပြင်ရောင်းသူ ဝယ်သူနှစ်ဦးကြားက ပင်မဦးတည်ရာ အရှုံးနဲ့အမြတ်ဆိုတာလည်း ရှိမှာပေါ့…. ဒီဇာတ်ကားကြည့်ပြီးတော့ တွေးစရာတွေက ခေါင်းထဲမှာ အစပေါင်းများစွာ ထွက်လာတယ်… ဘဝသရုပ်ဖော်လို့ပြောရမလား စီးပွားရေးလောက အကြောင်း ၊ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်အကြောင်းလား ဒါမှမဟုတ် ကြီးပွားချမ်းသာချင်တဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းပဲလား… ကိုယ်လိုချင်သလို ယူလို့ရပေမယ့်ကျွန်တော့်အတွက်က ရသစုံ ပါဝင်နေတဲ့ ဟင်းလေးအိုးကြီးတစ်ခုလိုပါပဲ…. ဟိုးငယ်စဉ်ကတည်းက ဘဝကို ချို့ချို့တဲ့တဲ့ နေလာခဲ့ရတဲ့ရှာကွန်းကိုသာရီ….. မိဘရဲ့လောင်းရိပ်အောက်ကနေ ထိုးထွက်ပြီးအလင်းရောင်ရှိမယ်ထင်တဲ့ မွန်ဘိုင်းမှာ အခြေချပြီးဘဝကို တက်လမ်းရှာချင်နေသူ လူငယ်လေး ရီဇ်ဝမ်အာမက်…. မြို့ပြရဲ့လူနေမှုစရိုက်တွေကြားမှာသိက္ခာနဲ့ငွေကို အလဲအထပ်လုပ်နေမိတဲ့ မိန်းကလေး ပရီယာရိုင်း… ဒီဇာတ်ကောင် သုံးခုက ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ပင်စည်ဆိုရင်ပြိုင်ဘက်ကုမဏီအုပ်စုတွေ ၊ သူတို့မိသားစုတွေအကြောင်းနဲ့စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်အကြောင်းတွေက ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အကိုင်းအခက်တွေလို့ပြောရမှာပါ…. ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲ ညွှန်းပါရစေ…. ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထွက် ဘောလိဝုဒ်ကားတွေထဲမှာဒီကားဟာ မကြည့်မဖြစ် ကြည့်သင့်တဲ့ကားစာရင်းမှာပါတယ်လို့ပြောရင်တောင် လွန်မယ် မထင်ပါဘူး ခင်ဗျာ။
Babysitter Wanted ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးဟာ ၂၀၀၈ခုနှစ်ထွက် အမေရိကန် Horror ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် Imdb rating 5.5/10ရရှိထားပြီး ဇာတ်ကားကြာမြင့်ချိန်ကတော့ ၁နာရီခွဲပါ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသူတွေက တော့ Sarah Thompson ,Bill Moseley, Kristen Dalton တို့ဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ကောလိပ်ကျောင်းသူလေးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Angie ဟာ ကျောင်းစရိတ်ရရှိဖို့အတွက် ကလေးထိန်းအလုပ်လျှောက်ခဲ့ပါတယ် သူမထိန်းရမယ့်ကလေးလေးနာမည်က Sam ပါ Sam ရဲ့နေအိမ်ဖြစ်တဲ့လယ်တောအိမ်အကျယ်ကြီးမှာ ပထမဦးဆုံးအလုပ်ဆင်းတဲ့နေ့မှာတော့ Angie တစ်ယောက်ထူးဆန်းတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာရပါတော့တယ် အမည်မသိဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေ….. အိမ်တံခါးကိုဖျက်ပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့လူတစ်ယောက်…… အလုပ်ရှင်မိသားစုရဲ့ ကြီးမားတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု…..စတဲ့သံသယဖြစ်ဖွယ်ခြောက်ခြားစရာတွေနဲ့အတူ Angie တစ်ယောက် ဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်
Babysitters Nightmare 2018
IMDb 5.7 ……… ချာလေလိုင်နာဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ Alfred E.Groves အထက်တန်းကျောင်းမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ပါ ကျောင်းတစ်ဘက်နဲ့အလုပ်တစ်ဘက်ပေါ့ တစ်နေ့တော့ ဘလ်ထရန်မိသားစုကနေ ကလေးထိန်းဖို့ သူမကိုငှားခဲ့တယ် ကလေးတွေထိန်းပေးတဲ့အလုပ် လုပ်ရင်းနဲ့ သူမအတွက် မမျှော်လင့်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုကြုံရတယ် အဲ့ဒါကတော့ကလေးတွေရဲ့ဖခင် မစ္စတာ ဘယ်ထရန်နဲ့ သံယော်ဇဉ်တွယ်မိကြတယ် သူတို့က အပျော်ရှာကြရုံအဆင့်ဆိုပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းခံစား ချက်တွေကလေးနက်လာခဲ့တယ်…. 18+ခန်းတစ်ချို့အတော်လေးပါဝင်ပေမဲ့ သိပ်အဆိုးဝါးကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး အိမ်ထောင်ရေးမှာ တစ်ချို့သောယောင်္ကျားတွေရဲ့အဖြစ်ကို ပုံဖော်ထားတဲ့ကားလေးပါ ဘဝရဲ့အနှစ်သာရဟာဘာလဲ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘာလဲ ေ၀ဝါးနေတဲ့အချိန် မိသားစုကိုရွေးမှာလား ငယ်ရွယ်လှပတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီး လက်ရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့မိသားစုကိုစွန့်ပစ်မှာလားဆိုတာကို တော့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး အိမ်ထောင်ရေးပညာပေးကားလေးမို့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျ…… ဇတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ ကို Pyae Xeinn Sett ပါ
mmbusticket Crazy Little Thing Called Love ဇာတ်ကားထဲမှာ မင်းသားမာရီယိုနဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းစွာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းမင်းသမီးချောလေးPimchanok Luevisadpaibul (Baifern) ကို အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်..ဟုတ်ပါတယ်…Back to the 90s (2015) ဒီဇာတ်ကားဟာလဲ သူလေး အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာလဲ သူလေးရဲ့ လှပသေသပ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ကြည့်ရှုသူတိုင်းကို စွဲဆောင်သွားဦးမှာပါ။မင်းသားတွေလဲ ဇာတ်ရုပ်နဲ့ကွက်တိကျတာကြောင့် ဒီဇာတ်ကားဟာ Rating မြင့်မားပြီး ကြည့်ရှုသူတိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ မပြုပြင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အတိတ်တွေရှိကြပါတယ်…ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ ဆန်းကြယ်မှုမှာ မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်ဖြစ်ဖူးခဲ့ကြမယ်…အသက်အရွယ်နဲ့ ရူးမိုက်မှုတို့ အချိုးကျနေတုန်းမှာ ခပ်မိုက်မိုက် လေလွင့်ဖူးခဲ့မယ်..ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ မပြုပြင်နိုင်တော့ဘူး.. နောင်တဆိုတာပဲ ပွေ့ဖက်နေကြရတာမလား…။ ဒါပေမယ့် အတိတ်ကိုပြန်သွားလို့ရမယ်….ဒါတွေကို ပြုပြင်ဖို့ အခွင့်အရေးကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ရခဲ့မယ်ဆိုရင်..ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ရမယ့် အရာတွေက ငယ်ရွယ်ပျိုမြစ်မှုတစ်ခုထဲလို့ ခပ်လွယ်လွယ်မထင်လိုက်ပါနဲ့။အစဉ်အဆက် ခမ်းနားခဲ့သလိုပဲ ချစ်ခြင်းက ဒေသမရွေး ကာလမရွေး ခမ်းနားနေခဲ့တာ ထင်ရှားပြခဲ့တယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းက တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်အခြေခံပြီးရိုက်ထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်….ဘာလို့လဲလို့ပြောရရင်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ရဲ့ 1996 ခုနှစ်မှာစပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ အီရတ်နိုင်ငံမှာ ငတ်မွတ်နေတဲ့သူတွေကို အစားအစာနဲ့ ရေနံလဲလှယ်ရေး (Oil-for-Food Program) အစီအစဉ်ကြီးမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းများစွာက အစိုးရရာထူးကြီးတွေနဲ့
နာမည်ကျော်ကုမ္ပဏီကြီးပေါင်းများစွာရဲ့ ဒေါ်လာဘီလျံနဲ့ချီတဲ့ လာဘ်စားမှု၊ ချစားမှုတွေအပြည့်နဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကို ဖေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ကုလသမ္မဂ္ဂဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အကြောင်းပါ။ဒီအမှုဟာ ကုလသမ္မဂ္ဂသက်တမ်းတစ်လျှောက် အပြောင်းအလဲအကြီးမားဆုံးဖြစ်စေခဲ့တဲ့ အမှုလဲဖြစ်တယ်။ဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးထားပုံက ကြည့်ပျော်ရှုပျော်အဆင့်ပဲရှိပါတယ်၊ ဆွဲဆောင်မှုမကောင်းသလို အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာတဲ့ အခြေအနေမျိုးလဲ တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ဘာလို့ ကြည့်သင့်တယ်လို့ ညွှန်းချင်တာလဲဆိုတော့ UN အပါအဝင် INGO အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အတွင်းရေးတွေနဲ့ လုပ်စားပုံတွေ၊ အလှူငွေတွေရအောင် ဘယ်လိုတွေ ဟန်ပြလုပ်ကြပြီး အိတ်ထဲဘယ်လိုထည့်တယ်ဆိုတာတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းဖြစ်နေလို့ပါ။ ၁၀၈ ခုနှစ်အတွင်း ထွက်ရှိထားတဲ့ နိုင်ငံရေးဆက်နွယ်မှုပါတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် သံတမန်တစ်ဦးရဲ့သားဖြစ်သူ မိုက်ကယ်ဆာလဗန်ဟာ ကုလသမဂ္ဂမှာအလုပ်ဝင်ဖို့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်.. မမျှော်လင့်ထားပဲ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းဝန်ရဲ့လက်ထောက်နေရာ ခန့်ထားခံလိုက်ရပါတယ်.. သူတာဝန်ယူရတဲ့ပရိုဂရမ်ဟာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခြေခံတဲ့ ပရိုဂရမ်ပေမယ့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်နေပြီး အာဏာရှင်တစ်ယောက် အမြတ်ထုတ်စရာ ပရိုဂရမ်တစ်ခု သာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်.. ဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း လက်စဖျောက်သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်.. သူ့အရင်ဝန်ထမ်းဟောင်းသေဆုံးမှုဟာ မရိုးရှင်းမှန်းသူသွားပြီး.. ကုလသမဂ္ဂအတွင်းခြစားမှုကို လိုက်လံဖော်ထုတ်ရင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ဆရာကိုယ်တိုင် ဒီအရှုပ်တော်ပုံထဲ ပါဝင်ပတ်သက်နေတာ သူသိသွားတဲ့အခါ သူဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ခက်ခက်ခဲခဲကြားထဲက ချစ်ခဲ့ရတဲ့ သူ့ချစ်သူကိုရော အန္တရာယ်ကြားထဲက သူကယ်တင်နိုင်ပါ့မလား ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေပါ ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ ဒီခြစားမှုကြီးကို တစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင် သူချပြနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်…ကုလသမ္မဂ္ဂအဖွဲ့ဆိုတာနဲ့ အရမ်းကောင်းတဲ့အဖွဲ့ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိသွားနိုင်စေတဲ့ ရုပ်ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်…UN အပါအဝင် INGO တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒါမျိုးရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင် အရမ်းရှားပါတယ်။ ဒီကားကိုတော့ ရိုက်ထားတာရိုးရှင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုမရှိပေမယ့် သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တန်ဖိုးကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အတွက် ကြည့်ဖူးသင့်ကြောင်းညွှန်းလိုက်ပါတယ်။
mmbusticketသွေးအေးအေးနဲ့ကြမ်းတဲ့ကားလေးလာပါပြီအငြိုးအတေးနဲ့ကလဲ့စားကားတွေဆို ပီပီပြင်ပြင်ရိုက်တတ်တဲ့ဘောလိဝုဒ်ရဲ့အထာအတိုင်း ဒီကားလေးထဲမှာလည်းရင်နင့်ဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့ရမှာပါဇာတ်လမ်းအညွှန်းကတော့ ရက်ဂျ်ဟူးနဲ့မီရှာတို့ဟာ ရော်ဘင်ဆိုတဲ့သားလေးတစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုလေးတစ်ခုပါ အနိစ္စဆိုတဲ့သဘောအတိုင်းကံကြမ္မာမုန်တိုင်းတစ်ခုကြောင့့်တစ်နေ့မှာ ဘဏ်ဓားပြတိုက်မှုတစ်ခုကနေ ကားယူပြေးတဲ့ဓားပြတွေကြောင့်မီရှာနဲ့ရော်ဘင်တို့သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ် လိုက်ရက်ခ်လို့ခေါ်တဲ့ရာဇဝတ်ကောင်တစ်ယောက်ကိုဖမ်းမိခဲ့ပေမယ့် ကြံရာပါတစ်ယောက်ကတော့ငွေတွေနဲ့အတူအစအနပျောက်သွားပါတယ် ဖမ်းမိခဲ့တဲ့လိုက်ရက်ခ်ကလည်းသူ့ကြံရာပါနာမည်ကိုရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့ပြီးထောင်အကျခံခဲ့ပါတယ် ဒီလိုရင်နင့့်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်မျိုးဟာသေသွားတဲ့ သူအတွက်တော့ဘဝကူးရုံပဲဆိုပေမယ့် ကျန်နေခဲ့တဲ့ရက်ဂျ်ဟူးအတွက်တော့ကမ္ဘာပျက်နေတဲ့အရူးတစ်ယောက်လိုပါပဲ သားသေ/ မယားသေလို့ အမုန်းတရားတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့တဲ့ ရက်ဂျ်ဟူးတစ်ယောက် အမုန်းတရားတွေကိုဘယ်လိုချေဖျက်သွားမလဲ တရားခံဆိုတဲ့သူတွေကကော ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ကြမလဲ စတဲ့ ဇာတ်ရှိန်အလှည့်အပြောင်းလေးတွေကိုတော့ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကျမှပဲ နားလည်သဘောပေါက်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြီးအောင်ကြည့်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းပေါ့ဗျာ…
Batman and Two-Face (2017)
Batman Vs Two Face (2017)IMDb….6.1,,,,,Rotten…100%Batman Vs Two Faceကတော့ 2017 မှာထွက်ခဲ့ပေမဲ့…1960 ပြည့်နှစ်များက Batman Theme ကိုပဲသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။Batman ရဲ့ Detective Skill တွေကို တစ်ကားလုံးလိုလို တွေ့ရမှာပါ။ ဒီကားဟာ 2016မှာထွက်ခဲ့တဲ့The Return of the caped Crusaderရဲ့ Sequel ဖြစ်တဲ့အပြင်1966 တုန်းက Batman မင်းသား Adam Westကပဲ Batman အဖြစ်အသံ သရုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။Batman ဝါ The Caped Crusaderနဲ့Robin ဝါ The Boy Wonder တို့နဲTwo- Faceတို့ ညဏ်ကစားကြမဲ့Batman ကားကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး။ဝေဖန်ရေးဆရာတွေပေးပါတယ်ဆိုတဲ့Rotten Tomatoes ရဲ့ Rating မှာ 100 အတိရထားတဲ့Super Hero..ကားကောင်းပါ။Dark Knight ကြီးကို ခဏရပ်ပြီး Caped Crusaderကိုခံစားကြည့်ကြပါစို့…Detective Comic ဝါ Dc fan Guy တို့…..ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ WiRa Aung ဖြစ်ပါတယ်….
“Batman ရဲ့ဇာတ်လမ်းအားလုံးကို သင်ကြားဖူးလား။အားလုံးကိုမကြားဖူးတာတော့သေချာပါတယ်။”တကယ်လည်းအကုန်မကြားဖူး မမြင်ဖူးဆိုတာကို သက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ Warner Bros. ကနေပြီးတော့ ဂျပန်ဒါရိုက်တာ Junpei Mizusaki နဲ့အတူပေါင်းပြီး Batman ကို ဂျပန် Anime ပုံစံထုတ်လိုက်ပါပြီ။Trailer ထွက်တုန်းက Superhero fan တွေကြားမှာအရမ်းရေပန်းစားခဲ့ပြီးတော့ Series အဖြစ်ထွက်ရှိမယ်လို့ အများထင်ကြေးပေးခဲ့ပေမယ့် တကယ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာ Movie အဖြစ်သာထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။Animation ဇာတ်ကောင်တွေကို Anime ဇာတ်ကောင်အဖြစ် ဖန်တီးထားတာကြောင့် အမြင်ဆန်းသစ်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့ Anime တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း Fight Scene တွေဟာလည်း သာမန် Animation ကားတွေနဲ့မတူပဲ သာလွန်ပြီး ကွဲထွက်နေပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း —————— Batman ဟာ Gotham မြို့မှာ Gorila Grodd ကိုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာ Grodd ရဲ့ အချိန်ယန္တရားအသက်ဝင်သွားတာကြောင့် ထိုအနီးအနားတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံး ဂျပန်ပဒေသရာဇ်ခေတ်ကိုရောက်သွားကြပါတယ်။Batman ဂျပန်ပဒေသရာဇ်ခေတ်ကို ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ ဆာမူရိုင်းတွေလိုက်ဖမ်းခြင်းကိုခံရကြောင့် ထွက်ပြေးရင်း တောထဲအရောက်မှာ Selina Kyle aka Catwoman နဲ့တွေ့ပါတော့တယ်။Selina Kyle အကြောင်းစုံရှင်းပြတဲ့အခါမှာ Batman ဟာ ဂျပန်ပဒေသရာဇ်ခေတ်ကို သူများတွေထက် ၂နှစ်ကြာနောက်ကျပြီးမှ ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သိခဲ့ရပါတယ်။သူရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲ Time Jump နဲ့အတူ ပါလာတဲ့ Gotham ရဲ့ Villain တွေဖြစ်တဲ့ Joker, Penguin, Two Faces, Deathstroke, Poison Ivy တို့ဟာ ပိုင်ဆိုင်ရာနယ်မြေအသီးသီးဆီမှာ အုပ်ချုပ်နေပြီးတော့ Grodd တစ်ကောင်ကတော့ အချိန်ယန္တရားနဲ့အတူပျောက်နေပါတယ်။ထိုခေတ်ကနေ ထွက်နိုင်မယ့်တစ်ခုတည်းသော သော့ချက်ဖြစ်တဲ့ အချိန်ယန္တရားကို Batman တစ်ယောက် ရှာဖွေရင်း ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေတွေ့ရမလဲဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲဆက်လက်ရှုစားလိုက်ကြပါ။
mmbusticket Bruce Wayne ရဲ့သား Damian Wayne က သူ့အဖေရဲ့လူမသတ်ရစည်းမျဉ်းကို သဘောမကျဖြစ်နေချိန်မှာ လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက သူ့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကို အဲ့ဒီလျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ နှစ်မြုပ်လို့ရပြီလို့ထင်မိတဲ့အခါမှာ …… (အိမ်း ကွကိုကြိကြပါ)?Gotham မြို့မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Damian က Doll Maker ကိုရှာခဲ့ပါတယ်။ Damian က သူ့ရဲ့ပင်ကိုဗီဇအတိုင်း Doll Maker ကိုသတ်ဖို့အထိစဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့ သူ့အဖေ Batman ရဲ့ လူမသတ်ရတဲ့ စည်းမျဉ်းကိုတော့ မတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲ့အချိန်မှာ Damian ကိုအမြဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့ Talon က Damian ကို လူမသတ်ရစည်းမျဉ်းကိုကျော်လွန်နိုင်ဖို့နဲ့ ပင်ကိုဗီဇကိုသာ အလေးပေးဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ Talon က Damian ကို ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ် ……. ?Gotham မြို့ရဲ့ အခမ်းနားဆုံးမိသားစုနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Wayne family နဲ့ Vanaver family ရဲ့ မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ Bruce Wayne နဲ့ Samantha Vanaver နှစ်ယောက်အကြား သံယောဇဉ်လေးကိုလည်း ရှုစားကြပါခင်ဗျ ငိငိ …..?? Teen Titans မှာရောက်နေပေမဲ့ အကူအညီလိုရင် လိုသလိုသိတတ်တဲ့ First Robin:Dick Grayson လဲပါပါတယ် ….?Bruce Wayne ငယ်ငယ်က အခန်းတွေလည်းပါတာမို့ ငယ်ငယ်က Bruce ဟာအခုလိုမာမာထန်ထန်မဟုတ်တာကိုလည်းကြည့်ခွင့်ရမှာပါ Bruce သိမ်ငယ်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါ ဖခင်တစ်ယောက်လိုအားကိုးလို့ရတဲ့ Alfred … အိမ်သန့်ရှင်းရေးကအစ Technology အဆုံးအားကိုးရတဲ့ Alfred … သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုနေပေးနိုင်တဲ့ Alfred …. ကျွန်တော်တို့အချစ်တော်Alfred ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကလည်းပေါ်လွင်ပါတယ်။Damian က Bruce Wayne ရဲ့သွေးအရင်းပေမဲ့ Ra’s al ghul က လေ့ကျင့်ပေးထားတာကြောင့် သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းက မာကျောတယ်၊ လက်စားချေချင်တယ်၊လူသတ်ချင်တယ်၊ သို့ပေမဲ့ Bruce အပေါ်မှာတော့ ဘယ်လောက်ထိသံယောဇဉ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ …..ဒီ Animation ကို Scott Snyder ရေးသားခဲ့တဲ့ Batman:The Court of Owls story arc ပေါ်အခြေခံထားပြီး ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ Batman:Bad Blood animation ကိုထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ Batman vs Robin animation က ကျွန်တော်တို့ DC animated movie တွေရဲ့ထုံးစံမပြတ်အခန်းဆက်တွေထဲကတစ်ခုပါပဲ။Series ပုံစံနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Son of Batman(2014)—->Batman vs Robin(2015)—–>Batman:Bad Blood(2016) တွေပါ။
ဒီကားလေးကိုထွေလာကြည့်ပြီးထင်သလောက်မကောင်းဘူးလို့ထင်ထားခဲ့ပေမယ့်ပျင်းနေတာနဲ့ ဇာတ်ကားစစ်ရင်းကြည့်လိုက်မိတဲ့အခါသေချာကြည့်မိလာတဲ့အထိ အဆုံးထိဆွဲဆောင်မှု့ရှိသွားခဲ့တဲ့ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်…Netflix ကနေပြသပြီးတော့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ..ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူဌေးသမီးလေး အမာလျာတစ်ယောက်ကံအကောင်းမလှလို့ဆင်းရဲသွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပါ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပါတယ်..သူမဟာ အကဝါသနာပါတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုနာမည်ကြီးဖို့လည်း အရမ်းကိုစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကောင်မလေးပေါ့….သူမဘဝပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာအပျော်တမ်း Battle Dance ကတဲ့ မီကာအဲဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံမိပါသွားပါတယ်…ထူးခြားတာက သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကတွေဟာမတူညီကြပါဘူး…သူမရဲ့အကပုံစံက နူးညံ့သိမ်မွေ့သလောက်အဲဒီကောင်လေးရဲ့အကကတော့ Battle ဆန်ဆန်ကရတဲ့မြူးကြွတဲ့ကကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်….သူမတို့နှစ်ယောက်အတွက်ညှိယူဖို့ဖြစ်လာတဲ့အရာကတော့ကကွက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်…မီကာအဲရဲ့ကကွက်တွေ နဲ့လိုက်ညှိယူနေရာကနေပြီးတော့ Battle Dance ကိုစပြီးသူ့ဆီကနေသင်ယူခဲ့ပါတယ်..အနေနီးလာတဲ့ သူမတို့နှစ်ယောက်ကြားသံယောဇဉ်တွေများလာခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံး သူမချမ်းသာစဉ်က ချစ်သူကောင်လေး အက်ဆဲလ်နဲ့ပြသနာဖြစ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ်…ဒီကားလေးဟာ ချမ်းသာတဲ့ကောင်လေး နဲ့ ရိုးရိုးသာမာန်Underground Battle Dancer ကောင်လေး နှစ်ယောက်ကြားဗျာများနေရတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအလန်းစား Battle Dance ကကွက်တွေနဲ့ ဖော်ကြူးထားပါတယ်…ဒရမ်မာကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက် အစပ်တည့်မှာဖြစ်သလို အရမ်းကိုရိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက် အကိုက်ပါပဲ….မြူးကြွတဲ့ Beat တွေနားထောင်ရင်းကကွက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကားလေးက သင်တို့အတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ…ဒါကြောင့် အခုပဲကြည့်ဖို့ပြင်လိုက်ရအောင်လား…..
Battle Drone ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ ၂၀၁၈ခုနှစ်ထွက် အမေရိကန်အက်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာ Imdb rating 4.6/10 ရရှိထားပြီး ဇာတ်လမ်းကြာမြင့်ချိန်ကတော့ ၁နာရီခွဲပါပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသူတွေကတော့ မင်းသမီးချော Dominique Swain…..Natashia Malthe…..မင်းသား Michael Pare….Louis Mandylor စတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့အမေရိကန်ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်အဖွဲ့ စီအိုင်အေနှင့်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမားတစ်ဖွဲ့ဟာ ယူကရိန်းနိုင်ငံ ချာနိုဘီမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်….. သို့ရာတွင် အမေရိကန်အစိုးရဘက်မှသစ္စာဖောက်ခြင်းကိုခံရပြီး သူတို့ကိုချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်မယ့် ကြောက်မယ်ဖွယ်ရာ အရာတွေက စောင့်ကြိုနေပါတော့တယ်…..သူတို့တစ်တွေ လွတ်အောင်ပြေးနိုင်ပါ့မလား…..ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အက်ရှင်ခန်းတွေမြင်တွေ့ရမလဲဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါဦး
Bayou Caviar(2018)ဒီကားဟာ Rotten Tomatoesက ဆရာကြီးတွေ Rate လုံးဝမပေးထားပဲ Audience Score 100% အတိရထားတဲ့ကားပါ။ Tom Cruise ရဲ့ Jerry Maguireကားမှာ Supporting Role အော်စကာရထားတဲ့ မင်းသား Cuba Gooding Jr. ကိုယ်တိုင်ဇာတ်ညွှန်းရေး ကိုယ်တိုင်ရိုက် ကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Old X men timeline က Attractive အပြည့်နဲ့ မမ ဂျင်း Famke Janssenကို တစ်ဖန်မြင်ရဦးမဲ့ ကားလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ှဇာတ်လမ်းသွားမှာတော့ ဘောက်ဆင် ချန်ပီယံဟောင်း တစ်ယောက်နဲ့ ရုရှ လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ကို ပြထားပြီး လိင်ကိစ္စ အာဏာ ငွေ အကြမ်းဖက်မှုတွေကြားမှာ မိသားစုအတွက် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်း ဒရာမာ အပြည့်ခင်းပြသွားမှာပါ.. ဘယ်လိုခင်းမလဲတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ခံစားကြည့်ပါ။ဒီကားမှာ မတ်မတ် Famke Janssenကြီးရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်စတိုင်လေးတွေကို အတော်ကြွေချင်စရာကောင်းအောင် မြင်ကြရမှာပါ။ ဒီတော့ကာ Old X men fan တွေ ကြည့်ကို ကြည့်သင့်တယ်လို့ Recommand ပေးပါတယ်။ထပ်ဆောင်းပြောရရင် Richard Dreyfuss ကြီးဟာလည်း Leading Role Oscar ပိုင်ရှင်ကြီးပါ။ ကဲ..Oscar Winner နှစ်ယောက်နဲ့ ဒီကားက ကြည့်ဖို့တန်လား မတန်လားတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ပဲ ဆုံးဖြတ်ကြပါတော…ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကို Wira Aung မှရေးသားပေးပြီး ဘာသာပြန်သူကတော့ Nay Chi ပဲဖြစ်ပါတယ်…
mmbusticketBe with you ဆိုတဲ့ကိုရီးယားကားလေးကတော့ စာရေးဆရာ Takuji Ichikawa ရေးသားထားတဲ့ ဝတ္ထုကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ 2004 ခုနှစ်က ထွက်ရှိထားတဲ့ ဂျပန်ကားလေးကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ မိဘမေတ္တာ၊မိသားစုမေတ္တာ၊ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့သံယောဇဉ်နဲ့ အမေ မရှိတော့တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်တွေ…..ရသပေါင်းစုံကိုပေးတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါအသက် ၇ နှစ်အရွယ်မှာ အမေဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ အမေဟာ မိုးရာသီရောက်တဲ့အခါ မိုးစက်ရထားကိုစီးပြီး တိမ်လွှာတိုင်းပြည်ကနေ သူ့ဆီကိုပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ ပုံပြင်စာအုပ်ထဲကအတွေးတွေ အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ ဂျီဟို၊ဒီလိုနဲ့ မိုးရာသီရောက်တဲ့အခါ ပုံပြင်ထဲကအတိုင်း တကယ် သူ့အမေပြန်လာတာကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ ဝမ်းသာမဆုံး၊မယုံနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ သားအဖနှစ်ယောက်သို့သော်လည်း အမေဖြစ်သူကတော့ ဘာမှမမှတ်မိနိုင်ပဲ မှတ်ဉာဏ်တွေပျောက်ဆုံးနေခဲ့တယ် သူ့အမေနဲ့တစ်ပုံစံတည်းတူတဲ့သူဟာ တကယ်ပဲ တိမ်လွှာတိုင်းပြည်ကနေ ပြန်လာခဲ့တာလား……….ဒါမှမဟုတ် ရုပ်တူတဲ့ တခြားတစ်ယောက်လားဆိုတာ
Beautiful Acccident (2017)
2017 ခုနှစ်ထွက် Imdb 6.9 ရထားတဲ့ အချစ်ဟာသဇာတ် မြူးကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ထက်မြက်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ကသူ့အချစ်ရေးမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အလွဲလေးတွေကို ရိုက်ကူးပြထားတာဖြစ်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ ပိတ်ရက်မှာ အပန်းဖြေကြည့်ဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ အောင်မြင်မူ့တွေရနေတဲ့ ရှေ့နေမတစ်ယောက် တစ်နေ့မှာ အဝေးပြေးလမ်းမှာ ကားမတေည်တဆမူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မတော်တဆမူ့ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ အကျိုးဆက်ကို သူကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူလာဖို့ ဖြစ်လာတော့ သူ့ရဲ့ ဆိုးသွမ်းတဲ့ သားသမီး၂ယောက်နဲ့ ယောကျာ်းကြားထဲမှာ ဘယ်လိုတွေဗျာများရမလဲ သူတာဝန်ယူရတဲ့ ပြသနာကကောဘာလဲ သူကိုယ်တိုင်ကကော ဘယ်လို အလွဲတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတာလဲ အစရှိတာတွေကိုတော့ပရိတ်သတ်ကြီးက ဆက်လက်ကြည့်ကြရမှာပါ
ကျွန်မတို့က အက်မွန့်ဟေးက အမှတ် ၃၁၁ လီနော့ခြံမှာ Video ရိုက်ခွင့်လာယူတာပါ …” – ” မင်းတို့အဲအိမ်ကိုမသွားသင့်ဘူးနော်….ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်..” ”မီးတွေ ပိတ်သွားတာတောင် သီချင်းပွင့်နေသလိုမျိုး ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလား ” ” မီးတွေမှောင်လိုက် လင်းလိုက် ပုံစံမျိုးလား” -” လူတွေအပိုင်းပိုင်းခုတ်ခံရပြီး နံရံပေါ်မှာ လက်ဝါးကပ်ပုံစံမျိုးထားခံရတာ အဲလိုကြောက်စရာကောင်းတာမျိုး” ”မင်းတစ်ယောက်တည်းနေတုန်းက ဘာမြင်ခဲ့တာလဲ” – ”ငါပြောတာကိုယုံလိုက် မင်းမသိချင်ပါဘူး….” ”ဘေလီလုပ်ပါကွာ…” – ”ငါ အလောင်းတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်ကွာ… ” ” တကယ်လား…” ” ဘယ်သူတွေလဲကွ ” – ” မင်းလည်းပါတယ်…..” Horror ပရိတ်သတ်တွေအတွက် “Before someone gets hurt”ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်… သရဲရှာဖွေရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ အင်တာနက်ပေါ် အထိုက်အလျောက် နာမည်ရထားတဲ့ သူငယ်ချင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့… စနောက်တာ ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ.. တစ်နေ့ သူတို့သရဲရှာဖွေရေးအဖွဲ့ ရိုက်ကူးရေးလုပ်မဲ့ နေရာက အရင်နေရာတွေနဲ့ မတူတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…. ဒီအိမ်မှာပဲ လူသတ်မှုပေါင်း အများအပြားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်… သေဆုံးတဲ့လူတွေကလဲ ထူးဆန်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ သေဆုံးခဲ့ကြတာပါ… သူတို့အဖွဲ့ဟာ အရင်ကထက် နာမည်ပိုရချင်တာနဲ့ ဒီအိမ်ကို စွန့်စားရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်… သူတို့ အဲ့အိမ်ကို ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့…. သူတို့အတွက် နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ…. ကံဆိုးစွာနဲ့ ဒီအဖွဲ့ဟာ အဲ့အိမ်မှာ ပိတ်မိခဲ့ကြပါတယ်… သူတို့ဘယ်လို ကြောက်စရာတွေနဲ့ တွေ့ပြီး ဘယ်သူတွေ လွတ်မြောက်နိုင်မလဲဆိုတာ ပရိတ်သတ်ကပဲ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ကြည့်ရှုပါဦးနော်…